ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): September 2010
I do remember one Myanmar probe “Teacher and Daka are like water and lotus.” Teacher (in this case, teacher means the Buddha and the Sangha) and supporter (Daka) are depending on each other. Teacher cannot live without supporter. If teacher is far away from supporter, he has no one who will support him with the four requisites such as robe, food, monastery and medicine. That’s why he or she should have supporter and cannot live without supporter.
Likewise, supporter cannot also live without teacher. He or she should have teacher who can differentiate between what is good and what is bad for him or her. If he or she has no teacher, he or she cannot differentiate between what is good and what is bad him or her. Asaresult of it, he or she may do what he or she should do or what he or she should not do. If he or she does what is good, it is no problem for him or her. Otherwise, if he or she performs bad deeds, he or she will go to hell where is full with the various kinds of suffering. That is why he or she cannot live without teacher. Therefore teacher and supporter are depending on each other.
As had been mentioned above, Dayaka(supporter)’s duty is to support teacher(the Sangha) who have been performing to propagate the Buddha’s Sasana. Teacher’s duty is to preach the truth Dhamma the supporters. As to my duty, I would like to expound the truth Dhamma all of you as the expressing your sense of gratitude.
The Late Venerable Moe Gok Sayadaw always admonishes his disciples “All of you! Try to know what the Truth Dhamma is first. After knowing the Truth Dhamma, please do good deeds.” It is definitely right. When we search for the reason why the Late Venerable Moe Gok Sayadaw always admonishes his disciples, we will come to know it very well. If someone doesn’t know what the truth Dhamma is, he or she will perform the good deeds dedicating the human bliss and heavenly bliss. Asaresult of it, he or she will go round in Samsara which is birth and death. He or she will face many problems such as, association with the unbeloved ones, dissociation with the beloved ones, not getting what he or she wants, getting what he or she does not want, old age, decay and death and so on and so forth. Otherwise, someone does good deeds after knowing the Truth Dhamma. He or she never performs good deeds dedicating the human bliss and the heavenly bliss because he or she has differentiated the Truth Dhamma. According to the Truth Dhamma, he or she knows that the human bliss and the heavenly bliss is Dukkhasacca (the truth of suffering). Why should we say the human bliss and the heavenly bliss? Because the Buddha said:
“The new becoming (birth) is also suffering; getting old is also suffering; death is also suffering; sorrow, lamentation, pain, grief and despair are also suffering; association with unlovable ones is also suffering; disassociation from lovable is also suffering; not getting what one wants is also suffering; getting what one does not want is also suffering” in Dhammacakkapavattana Sutta (the great discourse on the wheel of Dhamma, we should say the human bliss and the heavenly bliss. That is why the Late Venerable Moe Gok Sayadaw always admonishes his disciples “All of you! Try to know what the Truth Dhamma is first. After knowing the Truth Dhamma, please do good deeds.” As I am the Late Venerable Moe Gok Sayadaw’s disciple, I admonish my Upasakas and Upasikas:
“Please try to know the Truth Dhamma first. After that, please do good deeds dedicating Nibbana which is free from suffering.”
Thus, your good deed (Dana) will be the highest dana (Vivattanissita dana) which is free from Samsara (birth and death). To attain Nibbana, all of Upasakas and Upasikas will have to practice meditation. Here, I would like to explain to my Upasakas and Upasikas how to practice meditation or how to use the immortal medicine in briefly.
Here, immortal medicine means the Paths (Maggangas) leading to the attainment of immortality (Nibbana), deliverance from the cycle of birth and death. With respect to their stage of development, paths are classified into two levels, namely, Mundane Fivefold path (Lokiyapancangika-magga) and Supramundane Eightfold Path(Lokuttara-atthangika-magga).
The Mundage Fivefold path is composed of the following path:
(1) Right view(Sammaditthi)
(2) Right thought (Sammasankappa)
(3) Right effort (Sammavayama)
(4) Right mindfulness(Sammasati)
(5) Right concentration(Sammasamadhi)
Of five paths, the first two are called Wisdom Path (Pannamagga) and the next three are Concentration Path (Samadhimagga). Here, the Wisdom path plays the leading role.
The Fivefold Mundane Path is also called Vipassanamagga, Lokiyapancangikamagga, Pubbabhagamagga and Purecarikamaga, etc. Whatever they may be called, the main thing is to apply them practically in practicing Vipassana meditation, that is, to employ them as immortal medicine.
Here, you should bear in mind that, to an ordinary worldling only the Mundane Fivefold Path, i.e. the Insight Path (Vipassana-magga) is applicable in the course of insight meditation. Hence, it is the Forerunner Path (Pubbabhagamagga) heralding the Noble Path (Ariya-magga); it may be called the initial portion of immortal medicine.
In Vipassana practice, the Vipassana-magga functions as the next following consciousness (insight knowledge) which observes the perishing of the previous one, called Anicca (impermanence). In this process, the preceding Anicca and the subsequent Magga go on concurrently without allowing any defilement (Kilesa) to creep in between them. It is the technique of killing the cause to prevent the effect. As meditator keeps on meditating the arising and the disappearing of the five aggregates, he gradually attains the two highly developed stages of Vipassana knowledge, namely, Yathabhutanana (knowledge according to the reality) and Nibbindanana (knowledge of disgust); and eventually he gains the Magga-nana (the path knowledge).
In this connection, it should be borne in mind that, the first two Vipassana knowledge, which sees the truth nature of the ceaselessly arising and the disappearing of the Khandha, and which disgusts the nature of them, are still Mundane Path knowledge; only the Magga-nana which culminates in the cessation of the arising and the disappearing of the Khandhas, and sees Nibbana, is Supramundane Path knowledge. However, the later could not be attained without the development of the former.
With the attainment of the three stages of knowledge, the meditator becomesaSotapanna, who initial enters the stream leading to Nibbana (the immortality). At this stage there arises in the Sotapatti Path Consciousness the Supramundane Eightfold Path, including Moral Path (Sila-magga) i.e. Right Speech (Sammavaca), Right Action (Sammakammanta) and Right livelihood (Samma-ajiva). A Sotapanna had already eliminated egoistic wrong view (sakkayaditthi) and doubt (vicikicca). He had by means of immortal medicine; cure himself the disease of defilements toacertain extant. So he free from the danger of falling into the woeful planes in the next existences. At the most there are only seven existences for him before he eventually attains the highest stage of Arahatta Magga(Path), Phala(Fruition) and the final stage of Nibbana. There are three stages yet to attain after becomingaSotapanna, i.e. Sakadagami(Once Returner), Anagami (Non-returner) and Arahant (Perfect One).
It is to be borne in mind that, only when there exist the arising and the perishing of mind and matter, there is mortality, otherwise, there is no mortality. Eventually, the cessation of arising and perishing of mind and matter is immortality-Nibbana.
When there is no mind and matter, there is no death; and when there is no death, there is Nibbana, i.e. immortality, Amata. Immortal medicine is, indeed, the path leading to the cessation of suffering (Dukkha). Now I have given you the immortal medicine, which is not yet produced by the modern scientists in the world.
You should constantly use the immortal medicine, that is to say, you should ‘incessantly and constantly’ observe the arising and the disappearing of mind and matter, especially your mind according to Moe Gok Sayadaw’s way, while you going, standing, sitting, and lying down. The more you observe, the more you become repugnant of the arising and disappearing mind and matter. In fact, it is Insight Wisdom (Vipassana-panna) which leads you from the state of arising and perishing(Sankhata) to the state of non-arising and non-perishing(Asankhata).
With reference to the Four Noble Truths, the arising and the disappearing of the Khandha is Dukkha-sacca. The knowing of the arising and the disappearing of the Khandha is Magga-sacca. Extermination of Tanha (craving) and other defilements is the cessation of Samudaya-sacca. Non-appearance of rebirth, decay and death is Nirodha-sacca. Hence, Vipassana meditation on the arising and the disappearing of the Khandhas covers the whole of the Four Noble Truths expounded by the Buddha.
Therefore, Vipassana meditation should be practiced as soon as possible. Practicing Vipassana meditation is using the immortal medicine. Now I have given you the immortal medicine, compounded by Moe Gok Sayadaw as to the Buddha’s way asagift of Dhamma or asagift of gratitude to you. May I conclude my Dhamma talk here urging “Please use this immortal medicine” so that all of you can realize Nibbana.
May all of you be free from the various kinds of suffering because of your good deed!
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:16 AM0comments Links to this post
အသက်၃၅နှစ်အရွယ်တွင် မိမိ၏ အဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ ‘ငါ’ ရှာသောအလုပ်ဖြင့် စမ်းသပ်အားထုတ်၏။
ဗုဒ္ဓက ‘ငါ’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ‘သူတစ်ပါး’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တကယ်ရှိသည်မဟုတ်။ အထင်မှားကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဟောတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်ကား ‘ငါ’ဟုထင်မှတ်ခြင်း၊ ‘သူတစ်ပါး’ဟု ထင်မှတ်ခြင်းတို့သည် အထင်မှားခြင်း၊ (ဒိဋ္ဌိ)မျှသာ ဖြစ်သည်ဆိုပါလျှင် အချို့ က ‘ငါ’ဟူ၍ အထင်မှားသူမှား၊ အချို့ က ‘သူတစ်ပါး’ဟူ၍ အထင်မှားသူ ဖြစ်သင့်သည်။ ယခုသော် မိမိကိုယ်ကို ‘သူတစ်ပါး’ဟု အထင်မှားသူ တစ်ယောက်တစ်လေမျှမရှိဘဲ ‘ငါ’ ဟူ၍ အသီးသီး တညီတညွတ်တည်း အထင်မှားသူတွေချည်း တွေ့ရသည်။ ဤအခြင်းအရာကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အထင်မမှားကြဘဲ ‘ငါ’ ဟူ၍ချည်း တညီတညာတည်း အထင်မှားကြခြင်းမှာ အထင်မှားစေလောက်အောင် လုံလောက်သော အကြောင်းတစ်ခု ဧကန်မုချ ရှိရမည်။ ထိုကဲ့သို့ အထင်မှားစေအောင် လှည့်စားသော အခြင်းအရာသည် အဘယ်နည်းဟု မိမိကိုယ်ကိုမေး၏။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအခြင်းအရာကို စာထဲ၌လည်းမရှာ၊ မည်သူ့အားမျှလည်း မမေးဘဲ၊ မိမိ၏ စိတ်အတွင်း၌ တွေ့အောင်ရှာ၏။ ၆ရက်မြောက်သောနေ့၌ အဖြေတွေ့၍ သင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ဖူးလေသည်။ (အရိပ်အမြွက် ဖော်ပြရသော်...သတ္တ၀ါသည် သေတ္တာကြီးကို မြွေထင်သည်မဟုတ်၊ ကြိုးကိုမြွေထင်မိခြင်းမျှသာ ဖြစ်၍ တညီတညွတ်တည်း အထင်မှားမည်ဆိုကလည်း မှားလောက်ပါပေသည်။)
ထို့နောက် ဂျပန်ခေတ်၌ အသက် ၅၀ကျော်အရွယ်တွင် ကျွန်ုပ်သည် စိတ္တာနုပဿနာအလုပ်ကို (လက်ထပ်ဆရာမရှိဘဲ) သတိပဋ္ဌာန်အရ အားထုတ်စမ်းကြည့်၏။
တဖြည်းဖြည်း လမ်းချော်သွား၍ စိတ်၏ပြောင်းလဲမှုများကို ရှုရမည့်အစား၊ တည်ငြိမ်လျက်ရှိသော စိတ်ကို တရှုတည်းရှုလျက် ရှိ၏။ အတော်ကြီး သမာဓိကောင်း၍ တစ်နာရီခွဲခန့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိသော စိတ်ကို (ကိုယ့်ဟာကိုယ်) ရှုကြည့်နေနိုင်သည်အထိ တတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါတွင် တန်ခိုးကလေးများပင် အထိုက်အလျောက် ရှိလာခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ စူးစူးစိုက်စိုက် ရှုလျက်ရှိစဉ် ဉာဏ်အမြင်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာ သိတတ်သော ၀ိညာဉ်စိတ်ဟူသည်မှာ သူတစ်ခု၊ ငါတစ်ခု ရရှိနေသည်မဟုတ်။ အားလုံးပေါင်းပါမှ ၀ိညာဉ်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ပမာဆိုသော် သမုဒ္ဒရာရေပြင်ထဲ၌ ၀တ္ထုပစ္စည်းများရှိနေရာတွင် တစ်ခုစီတည်သည်ဟု ဆိုရသော်လည်း သူ့ရေ ငါ့ရေ ရှိနေသည်မဟုတ်။ တစ်ဆက်တည်းသော ရေပြင်ကြီးသာရှိ၍ ထိုရေဖြင့် ဆက်သွယ်လျက် ရှိသကဲ့သို့ သတ္တ၀ါဟူသမျှမှာလည်း ရုပ်တရားတစ်ခုစီ ရှိစေကာမူ၊ ၀ိညာဉ်တည်းဟူသော အသိတရားတစ်ခုတည်းသာ ဆက်သွယ်လျက်ရှိသည်ဟု မြင်လာပါသည်။ ပထမ၌ တော်တော်နက်သော အမြင်ဟု ထိမိ၍ တော်တော်ကြီး ကျေနပ်မိ၏။ သို့ရာတွင် တရားအားထုတ်ထားသော ကျွန်ုပ်အဖို့မူကား၊ ဤအမြင်သည် (အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ တည်းဟူသော) လက္ခဏာမပါသည့် အမြင်မျိုးမျှသာဖြစ်၍ ‘၀ိညာဏံ၊ အနန္တံ၊ ၀ိညာဉ် အဆုံးမရှိ’ ဟူသော အရူပကမ္မဋ္ဌာန်း အခြေမျိုးသို့ ဆိုက်ရောက်သွားလေပြီဟု ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိသည်နှင့် လက်လွှတ်ပစ်လိုက်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ဤနေရာ၌ ရှင်းလင်းရန် တစ်ခုရှိနေသည်မှာ မဂ်ဖိုလ်အတွက် အားထုတ်ရာတွင် ‘လမ်းချော်’၍ သွားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း လက္ခဏာမထင်သည့် အတွက်ကြောင့်သာလျှင် ‘လမ်းချော်သည်’ ဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ၀ိညာဏံအနန္တံဟူသော အရူပကမ္မဋ္ဌာန်းသည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့၏ ကမ္မဋ္ဌာန်းမဟုတ်။ ပဉ္စမဈာန် ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်ပေသည်။ ၀ိညာဉ်အဆုံးမရှိဟူသော ဉာဏ်အမြင်သည် လက္ခဏာမဆိုက်သဖြင့် ပရမတ်အမြင် မဟုတ်သော်ငြားလည်း သမုတိသစ္စာနယ်တွင် အတော် အဆင့်အတန်းမြင့်သော ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်သည်ဟု နားလည်သင့်ကြ၏။ (ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ထိုကမ္မဋ္ဌာန်း ပေါက်ဖူးသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထိုနယ်ထဲသို့ ရောက်သွားဖူးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။) အရူပကမ္မဋ္ဌာန်းများ၏ အဆင့်အတန်းမြင့်ပုံကို သာဓကတင်ပြရသော်၊ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန် ပြုတော်မူခါနီး၌ ပထမဈာန်မှစ၍ အထက်ဆုံး အရူပဈာန်တိုင်အောင် အဆင့်ဆင့် ၀င်စားတော်မူသည်ဟု ကျမ်းဂန်၌ဆိုပါသည်။ ကိုယ်တော်မြတ်သည် နောက်ဆုံးသောအချိန်တွင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုပ်မျိုးကို ပြုတော်မူမည် မဟုတ်ဟု နားလည်းသင့်ကြပါသည်။ ဤအကြောင်းကို ရေးသားရခြင်းမှာ ဈာန်အလုပ်ကို အလွန်အထင်ကြီးသူများလည်းရှိ၍၊ အလွန်အမင်း အထင်သေးတတ်သူများလည်း ရှိတတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ‘လမ်းချော်’ ဖူးခြင်းကို ဖော်ပြပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဆောင်းပါးများကို သဘောကျ၍ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ကျင့်စဉ်အရ အားထုတ်သူများ၏ ‘လမ်းချော်’ပုံကို ဖော်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် အကြောင်းအားလျော်စွာ တွေ့ဆုံမိကြ၍ သူ၏ တရားအားထုတ်ပုံ အခြင်းအရာနှင့် ဆိုက်ရောက်သော အခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်းပြောပြခြင်းအားဖြင့် သိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံကျင့်စဉ်ကို အားထုတ်၍ ကာလအတန်ကြာသောအခါတွင် မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း၊ နံခြင်း၊ ချိုချဉ်ငန်စပ် အစရှိသော ရသာရုံပေါ်ခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်း စသော ပဉ္စာရုံများလည်း ချုပ်ငြိမ်း၍ ကြံစည်တွေးတောခြင်းတည်းဟူသော လောကီ ဓမ္မာရုံများလည်း အလျဉ်းရပ်စဲလျက်ရှိသော ကာလအပိုင်းအခြားမျိုးကို (အားထုတ်သည့်အခါတိုင်း) မကြာမကြာ ကြုံရဖူးကြောင်း၊ ဆိတ်ငြိမ်သော နေရာမျိုးတို့၌ အတော်အတန်ကြာရှည်စွာ ‘ချုပ်ငြိမ်း’၍ သာမန်နေရာမျိုးတို့တွင် အနည်းငယ်မျှသော အချိန်ကာလမျှလောက်သာ ‘ချုပ်ငြိမ်း’ကြောင်း၊ ပဉ္စာရုံများ အားလုံးနှင့် လောကီ ဓမ္မာရုံအမျိုးမျိုး ရပ်စဲလျက်ရှိသော ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်း ရှိသည့် ‘စိတ်’ကို မည်သို့သော စိတ်မျိုးဟူ၍ ခေါ်သင့်ပါသနည်းဟု ကျွန်ုပ်အား မေးလေသည်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျမ်းဂန်တတ်ကြီး တစ်ယောက်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း စာပေကျမ်းဂန်များကို ကျွန်ုပ်ထက် အချိန်ပေး၍ ဖတ်ရှုလေ့လာထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်ရိပ်မိသည်ကား စိတ်မည်သည် အာရုံနှင့်ကင်း၍ မနေစကောင်း ဟူသော စာဆိုရှိသည်ဖြစ်၍၊ လောကီအာရုံ အားလုံးနှင့် ကင်းစင်လျက်ရှိသော အခိုက်အတန့်ဆိုပါက လောကုတ္တရာ (နိဗ္ဗာန်) အာရုံဖြစ်ရမည်ဟု ယူဆထားဟန် ထူပေသည်။ နိဗ္ဗာန်အာရုံဟူသည်မှာ မဂ်ဆိုက်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌သာလျှင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေရာ၊ မဂ်စိတ်ဟူသည်မှာလည်း အလွန်ထင်ရှားသော အခြင်းအရာကြီးတစ်ခုဖြစ်၍ ‘မသိမသာ’ သဘောမျိုးဖြင့် မဂ်ဆိုက်သွားသည်ဟု မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိ၏။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြသော အခြင်းအရာ၌ ထိုကဲ့သို့ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ကြုံတွေ့လိုက်ရသည့် ကိစ္စမျိုးဟူ၍ မရှိပါချေ။ ဤတွင် မည်ကဲ့သို့ ဖြေဆိုရမည်ကို အကြံယူကာ ရုတ်တရက် မဖြေပါရစေနှင့်ဟု ခွင့်တောင်းရပေသေးသည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:58 AM4comments Links to this post
ကျွန်ုပ်တွေ့သော စိတ်သဘာဝ (၈)
တရားအားထုတ်ရာ၌ ဓမ္မ၀ိစယသမ္ဗောဇ္ဈင်နှင့် သမ္မာသင်္ကပ္ပတို့၏ အရေးကြီးပုံ
ကျွန်ုပ်အားထုတ်ပြီး အားထုတ်ဆဲဖြစ်သော ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းသည် ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့သည့် ၀ိပဿနာရှုနည်းပင်ဖြစ်သော်လည်း အခြားသောနည်းများနှင့် ခြားနားချက်ကြီးတစ်ခု ရှိခြင်းကို တင်ပြရပေဦးမည်။
များစွာသော ၀ိပဿနာ ဆရာ့ ဆရာတော်များက စိတ်သည်နှစ်ခု တပြိုင်တည်းမဖြစ်နိုင်၊ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုဖြစ်ရသည်။ မိမိ၏စိတ်ကို မိမိသိသည်ဆိုရာ၌ ရှေ့ စိတ်ကို နောက်စိတ်ကသိခြင်းသာ ဖြစ်ရမည်။ ဥပမာ တစ်စုံတစ်ခုကို ကိုင်ချင်သောအခါ၌ ကိုင်ချင်သောစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို လူသာမန်တို့မသိလိုက်ဘဲ၊ ရှုမှတ်သောယောဂီတို့ သည်သာလျှင်သိရသည်။ သို့ရာတွင် ကိုင်ချင်သောစိတ်က ရှေ့ မှဖြစ်သွားခြင်းကို နောက်စိတ်က လိုက်၍ သိခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဟောပြခြင်းကို ကြားနာရဖူး၏။ စိတ်နှစ်ခု တပြိုင်နက်တည်း မဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလည်း ၀န်ခံ၍ သူ့နည်းနှင့်သူ မှန်ကန်ခြင်းကိုလည်း ၀န်ခံရပေမည်။ သို့ရာတွင် ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းမူ၌ ရှေ့ ဆင့်နောက်ဆင့် မဟုတ်ဘဲ တပြိုင်နက်တည်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်ရသော အခြင်းအရာကို တင်ပြလိုပါသည်။
စိတ်နှစ်ခု တပြိုင်နက်တည်း မဖြစ်နိုင်ခြင်းမှာမူကား ဘုရားဟောဖြစ်ရုံသာမက၊ လက်တွေ့အားဖြင့်လည်း (စမ်းသပ်သူတိုင်းအဖို့) အလွန်ရှင်းလှသည်ဖြစ်၍ အထူးရေးသားရန်မလိုပါ။ သို့ရာတွင် ‘သတိ’ ဟူသည်မှာ စိတ် (၀ိညာဏက္ခန္ဓာ) မဟုတ်၊ စေတသိက်တရား (သင်္ခါရက္ခန္ဓာ)မျှသာဖြစ်၏။ ‘သတိ’ယှဉ်သော ‘စိတ်’ ဟူ၍လည်းရှိ၍၊ သတိမယှဉ်သော စိတ်ဟူ၍လည်း ရှိ၏။ စေတသိက်တို့မည်သည် (ဧကုပ္ပာဒ နိရောဓာစ၊ ဧကာလမ္ဗဏ ဟူသော သဂြိုဟ်အရ) စိတ်နှင့် တပြိုင်တည်းဖြစ်၍ တပြိုင်တည်းချုပ်သည်ဆိုရာ၊ စိတ်နှစ်ခု တပြိုင်တည်း မဖြစ်နိုင်သော်လည်း စေတသိက်ဖြစ်သော ‘သတိ’သည် စိတ်နှင့် တပြိုင်တည်း ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းအရ အားထုတ်သောယောဂီသည် သတိနှင့်ယှဉ်သောစိတ် ရှိသည်ဆိုအံ့။ မြင်သောအခြင်းအရာကို “မြင်သည်”ဟူ၍ နောက်စိတ်ကလိုက်ပြီး မှတ်နေရတော့သည်မဟုတ်။ သတိနှင့်ကြည့်လိုက်လျှင် သတိနှင့်မြင်လိုက်တော့ သည်သာ ဖြစ်၏။ မြင်ခြင်းတည်းဟူသော အခြင်းအရာကို အလုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ရှုမှတ်ရတော့သည်မဟုတ်။ မလပ်သောသတိရှိသည်ဆိုလျှင် မြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သတိတွဲလျှက်သာ ရှိရပါတော့သည်။ ဥပမာ ရေစိုသောလက်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုသော ၀တ္ထုပစ္စည်းကို ကိုင်တွယ်လိုက်သည့်အခါ ထိလိုက်ခြင်းနှင့် စွတ်စိုခြင်းတည်းဟူသော အခြင်းအရာတို့မှာ တပြိုင်တည်း ဖြစ်ရသကဲ့သို့ပင်။ ထိုလက်ဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု သိနိုင်ခြင်းကား မှန်သကဲ့သို့ စိတ်မှာလည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု သိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် စိုစွတ်သောလက်သည် ၀တ္ထုပစ္စည်းကို ထိခြင်းကား အလုပ်တစ်ခု၊ စိုစွတ်စေခြင်းကား အလုပ်တစ်ခု မဟုတ်သကဲ့သို့ သတိယှဉ်သောစိတ်သည် အာရုံနှင့်ထိတွေ့သည်နှင့် တပြိုင်နက် ရှုမှတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းအတိုင်း ကျနအောင် အားထုတ်သော ယောဂီသည် ဤအတိုင်းပင် တွေ့ရပေမည်။ ကျွန်ု့ပ်မှာ အကြိမ်ကြိမ် ၀န်ခံခဲ့သည့်အတိုင်း ကျမ်းတတ်တစ်ယောက် မဟုတ်သဖြင့် ကျမ်းဂန်ကို အခြေခံပြီး ကြံဆခြင်းမဟုတ်။ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်၍ တွေ့ရှိရသော အခြင်းအရာကို တင်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါ၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသော သဘာဝသည် ကျမ်းဂန်နှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယုံကြည့်ပါသည်။
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းအရ အားထုတ်သော ယောဂီသည် စင်္ကြလျှောက်ခိုက်တွင် ပစ္စုပ္ပန်တည့်အောင် သုံးသပ်လျက်ရှိသည်ဆိုအံ့။ ကြွခြင်း၊ လှမ်းခြင်း စသောအလုပ်များကို ‘ကြွတယ်၊ လှမ်းတယ်’ စသည့် ပညတ်အခေါ်အဝေါ်များဖြင့် ရှုမှတ်ရန်လိုသည်မဟုတ်။ ကိုယ်ကာယ၏ အမူအရာပြောင်းလဲပုံ အခြင်းအရာများကို မပြတ်သောသတိဖြင့် စောင့်ကြည့်ရန်သာ လိုပေသည်။ ယင်းသို့ရှိစဉ် ‘ဒိုင်း’ခနဲ မြည်သောအသံကြီးတစ်သံ ကြားရသည်ဆိုအံ့။ ၄င်းကို ကြားရခြင်းအတွက်ကြောင့် စင်္ကြနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ပျက်သွားလေပြီဟု နှလုံးမသာယာခြင်း ဖြစ်ဖို့မလို။ အာရုံပြောင်းလဲသွားခြင်းကို ချက်ချင်းသိစေဖို့ သတိရှိရန်သာ အရေးကြီးပေသည်။
အာရုံပြောင်းလဲသွားခြင်းကို မသိလိုက်ဘဲ “ဘာသံပါလိမ့်” “ဘယ်ကလာတဲ့အသံပါလိမ့်” အစရှိသော အတွေးအခေါ်များ ၀င်ရောက်မလာစေအောင်၊ သတိရှိစေဖို့မှာလည်း အတော်ရင့်ကျက်လာသော ယောဂီများ၏ အလုပ်ကြီးဖြစ်လေသည်။ ဤကျင့်စဉ်၏ အရေးကြီးသော အလုပ်မှာ လွန်လေပြီးသော အတိတ်စိတ် (သို့မဟုတ် အာရုံ) ကို လိုက်၍ သိစေဖို့မဟုတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်ဆတ်ဆတ်အပေါ်၌ သတိယှဉ်သောစိတ်ဖြင့် စောင့်ကြည့်ရန်သာ ဖြစ်လေသည်။ ရှေ့ စိတ်ကို နောက်စိတ်က သိခြင်းတည်းဟူသော အလုပ်မှာ အခြားရှုနည်းများအတွက် ဖြစ်ပေရာ၊ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ကျင့်စဉ်မူကား (ဓမ္မ၀ိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင်အရ) လွန်လေပြီးသော အာရုံကို ရံဖန်ရံခါတွင် တမင်တကာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းမျိုးမှတပါး အခါခပ်သိမ်း နောက်ပြန်ရှုမှတ်ရသော အလုပ်မျိုးမဟုတ်ပေ။ (ဓမ္မ၀ိစယ သမ္ဗောဇ္ဈင်အကြောင်းကို ရှေ့ တွင် ရှင်းလင်း ဖော်ပြပါဦးမည်။)
၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ခြင်း ဟူသည်မှာ ဂေါတမဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့သည့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း လမ်းစဉ်ကြီးဖြစ်သည် မှန်သော်လည်း ကျမ်းဂန်ကိုကြည့်၍ အားထုတ်ရခြင်းထက် ထိုကျမ်းဂန်အရ အားထုတ်၍ အထိုက်အလျောက် ပေါက်ရောက်ထားသည့် ဆရာတော်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ကာ အားထုတ်ပုံ အားထုတ်နည်းကို လက်ထပ်သင်ပြခြင်းခံရသည်က ပို၍အရာရောက်ကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဖူးခြင်းမရှိဘဲ ကျမ်းဂန်ထဲမှ ထုတ်နုတ်ကာ နည်လမ်းညွှန်ပြခြင်းသည်လည်း စာမဖတ်တတ်သူများအဖို့ အသုံးဝင်နိုင်သော်လည်း အဟုတ်တကယ် လိုလားသူဖြစ်ပါက အားထုတ်ထားသည့် အာစရိယထံ သြ၀ါဒခံယူပါမှ အရာရောက်နိုင်သည်ဟု နားလည်ကြရာချေသည်။ စင်စစ်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ လမ်းညွှန်ပြရုံနှင့် မပြီးသေး။ ဆရာသွားခဲ့သော လမ်းအတိုင်း တပည့်ဖြစ်သူက လိုက်လျှောက်ရာတွင် လမ်းခုလတ်၌ တိမ်းချော်ခြင်းများလည်း ရှိတတ်သည်ဖြစ်၍ မကြာမကြာ တွေ့ဆုံကာဖြင့် ပြုပြင်ပေးဖို့လည်း အရေးကြီးလှပေသည်။ ဤလမ်းကို ကိုယ်တိုင်မလျှောက်ဖူးသော ပုဂ္ဂိုလ်က ဆရာလုပ်ကာ မတိမ်းမချော်ရအောင် ပြုပြင်ပေးဖို့ဟူသည်မှာ လွန်စွာ သဘာဝမကျသဖြင့် ခဲယဉ်းသော အလုပ်တစ်ခုဟု ဆိုထိုက်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်၏ ငယ်ဆရာတော်က “လက်ထပ်ဆရာ အပြကောင်းမှ အကြောင်းကို ရိပ်မိနိုင်သည်” ဟု ဟောတော်မူဖူးလေသည်။
ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သော ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းကို သဘောကျသဖြင့် အားထုတ်သူအချို့ ၏ ‘လမ်းချော်’ ပုံနှင့် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် စိတ္တာနုပဿနာ အလုပ်ကို လုပ်ဖူးစဉ်က ‘လမ်းချော်’ ပုံတို့ကို ဖော်ပြရပေဦးမည်။
ကျွန်ုပ်၌ ငယ်ဆရာတော် ရှိဖူးသည်မှန်သော်လည်း အလွန်နုနယ်သောအချိန်က တွေ့ရသော ဆရာတော်ဖြစ်၍၊ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင် တစ်နေ့နေ့၌ အားထုတ်မည်ဟူသော သန္နိဋ္ဌာန်မျိုးစေ့ကလေး ချပေးခဲ့ရုံမှတပါး၊ ကျွန်ုပ်အား လက်ထပ်သင်ပြနိုင်သော အရေးအခွင့် မရှိခဲ့ချေ။
ဆရာတော်ပျံလွန်တော်မူသော်အခါ ကျွန်ုပ်မှာ အသက်၂၀ရှိပြီဖြစ်ရာ၊ ၁၃နှစ်ခန့်က ချထားခဲ့သော သန္နိဋ္ဌာန်ကို ကောင်းကောင်းသတိရသော်လည်း အားမထုတ်နိုင်သေးဘဲ၊ အမှတ်အသား ပြုထားလိုက်ရုံမျှသာရှိ၏။ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားသောအချိန်၌လည်း ကျွန်ုပ်သည် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်လှသောကြောင့်မဟုတ်၊ (နားမလည်သော အခြင်းအရာတစ်ခုကို လိုချင်တတ်သည်ဟူ၍လည်း မဖြစ်နိုင်) ဆရာတော်ဘုရားက ကျွန်ုပ်၏ မိဘများနှင့် အခြားတပည့်များအား မကြာခဏ ဟောပြောလေ့ရှိသည့် ‘နိဗ္ဗာန်’ ဟူသော အခြင်းအရာမှာ မည်သို့သော အခြင်းအရာမျိုးဖြစ်သည်ဟု သိလိုသဖြင့် တစ်နေ့နေ့တွင် သိအောင် ကြိုးစားမည်ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်မျှသာ ဖြစ်လေသည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:03 AM0comments Links to this post
အချို့ သောယောဂီများက ၀က္ကလိထေရ်၏ ပုံသက်သေကို တင်ပြ၍ ဗုဒ္ဓသည် မိမိကို ကြည်ညိုခြင်းထက်၊ မိမိ၏ တရားတော်အတိုင်း ကျင့်သုံးဆောက်တည်သော ယောဂီကိုသာ အလိုတော်ရှိကြောင်း ဟောတော်မူဖူးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခြင်းကား ဟုတ်ပေသည်။ ကိုယ်တော်ကို ဖူးမြော်ကန်တော့ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်စေပြီး၊ တရားကို အားမထုတ်သော ၀က္ကလိထေရ်အား မောင်းမဲတော်မူဖူးခြင်းလည်း မှန်ပေသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓကို အာရုံပြု၍ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်ကို အားထုတ်ခြင်းတို့၏ ဆက်သွယ်မှုရှိပုံကို (ကိုယ်တွေ့  အဖြစ်အပျက် တစ်ခုအားဖြင့်) တင်ပြလိုပေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အသက် ၃၅နှစ်အရွယ်တွင် တရားအားထုတ်ဖို့ ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်၊ ဗုဒ္ဓ၏ဉာဏ်တော်ကြီးခြင်းကို (မှန်းဆခြင်းအားဖြင့်) ကြည်ညိုလိုက်ရာတွင် မျက်ရည်များယိုစီးသည်အထိ ပီတိဖြစ်ခဲ့၍ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံးမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းကြည်လင်ခြင်း ဖြစ်သွားသည်ကို ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ဆက်လက်၍ တရားအားထုတ်ရာတွင် (ဗုဒ္ဓကို ခဏခဏ အာရုံပြုစေကာမူ) ထိုအချိန်က ရရှိခဲ့သည် ငြိမ်းချမ်းကြည်လင်သော အခြင်းအရာသည် ပျောက်တော့သည်မရှိဘဲ တရားအားထုတ်ဖို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြုသည့် ရက်သတ္တပတ်လုံးလုံး ဆက်လက်တည်ရှိခြင်းကို ကြုံဖူးသည်။ ဤသည်ကား ဗုဒ္ဓကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြည်ညိုခြင်း၏ အာနိသင်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်ကို အားထုတ်၍ ‘တရားရပြီ’ ဆိုသော ယောဂီများ၏ ကြည်ညိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း တင်ပြရန်ရှိသေး၏။ တရားရပြီဆိုသော အချို့ ယောဂီများသည် ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုသည့် အရာဌာနတွင် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သလောက် လေးစားမှုမရှိခြင်းကို တွေ့ ရ၏။ ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အထက်ပါအတိုင်း ပြောတတ်ကြ၏။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် ထိုသူတို့အပေါ် ကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်ခဲ့ရ၏။ တရားအားထုတ်ပြီး၍ ‘တရားကောင်း’ သော ယောဂီများသည် သူလိုငါလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကဲ့သို့ ဤဘုရား၊ ထိုဘုရား၊ ဤဆင်းတုတော်၊ ထိုစေတီတော်စသည်တို့ကို တကူးတက သွားရောက်ဖူးမြော်ကြဖို့ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်ကား မဟုတ်ချေ။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်၏ ငယ်ဆရာတော်သည်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နှိုက်က မဂ်ဆိုက်ပြီဟူ၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓအား (ဤလက်ထက် ယောဂီများထက်) လွန်စွာ ကြည်ညိုလေးစားကြသည်ကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ၄င်းတို့သည် တရားနှင့်ပတ်သက်သော စကားမျိုး ပြောဟောသည့်အခါတိုင်း၊ ဗုဒ္ဓအား လက်အုပ်တချီချီနှင့် ပြောဟောသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထိုအမူအရာကို ထားပါဦး။ ဗုဒ္ဓ၏တရားနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ဗုဒ္ဓကို သတိရသော မျက်နှာထား၊ ကျေးဇူးတင်သော အမူအရာတို့ကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရပေသည်။ ဤသို့သော အခြင်းအရာကြောင့် ‘တရားရဖို့သာ အရေးကြီးသည်။ ဘုရားရှိခိုးနေဖို့ အရေးမကြီးလေဟန်’ ပြုမူကြသော ဤခေတ်ယောဂီများအပေါ်၌ ကျွန်ုပ်သံသယာဖြစ်မိ၏။
ရှင်းဦးအံ့။ မိမိအား အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖူးသည့် ကျေးဇူးရှင်တစ်ယောက်အား မကြာခဏ သတိရတတ်ခြင်းသည် ကျေးဇူးသိတတ်သော လူများ၏ သဘာဝပင်ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်သည် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ခြင်းတည်းဟူသော အနာဂတ်အရေးအတွက်သာမက၊ ဤပစ္စက္ခဘ၀တွင်လည်း (မဂ်အစစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်) သူလိုငါလိုလူများထက် စိတ်သက်သာရာရသော အကျိုးတရားကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု ဆိုပေရကား၊ ၄င်းနည်းလမ်းကို ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်အား ကျေးဇူးမတင်ဘဲ၊ ခဏခဏ သတိမရဘဲ နေသင့်သည်လည်းမဟုတ်၊ နေနိုင်လိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်နားလည်သည်။ ဤခေတ်ယောဂီများသည် မိမိတို့၏ (အာစရိယ) ဆရာသမားအကြောင်းကို ဂုဏ်တင်၍ ပြောတတ်ကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓကို အာရုံပြုခြင်း နည်းပါးသည့်အနေမျိုး ၀န်ခံတတ်ကြသည်မှာ ကျွန်ုပ်အဖို့ရာ၌ သံသယဖြစ်စရာ အချက်ကြီးတစ်ခုအနေဖြင့်သာ ရှိနေပါတော့သည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:55 AM0comments Links to this post
၀ိပဿနာအလုပ်သည် စိတ်ညှို့ မဟုတ်
ကျွန်ုပ်၏ အကြိမ်ကြိမ် ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည့် “ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ”နည်းမှာ မိမိကိုယ်တိုင် မကြုံဘူး၊ မတွေ့ဘူးသော အခြင်းအရာကို မှန်းဆပြီး စိတ်ကူးတွေးတောရန် မလို၊ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်အပေါ်၌သာ အာရုံပြုခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း သဘောတရားများသည် ဉာဏ်အမြင်ထဲတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်ထွက်လာရသည်။ ဗုဒ္ဓက ထင်ရှားသော အာရုံတို့ကိုသာ စောင့်ကြည့်ရမည်။ မထင်ရှားသော အာရုံများကို ရော်ရမ်းမှန်းဆပြီး ရှုမှတ်ခြင်းမပြုသင့်ဟု ဟောတော်မူ၏။ အနောက်တိုင်း လောကဓာတ်နည်းမှာလည်း စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အတော်ပင် နည်းလမ်းကျ၏။ “သိသောအရာမှ မသိသောအရာသို့ တက်ရမည်” (from the know to the unknown) ဟု ဆိုပေသည်။ ခဏခဏ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော ရုပ်၊ သို့မဟုတ် အသိစိတ်ကလေးသည် (သတိနှင့်ယှဉ်လျက်) မြင်နိုင်သော အခြင်းအရာဖြစ်၏။ ချသောခြေထောက်သည် လှမ်းသောခြေထောက် မဟုတ်တော့ဆိုခြင်းမှာ ယောဂီအမြင်မဟုတ်။ မြင်ပြီးသော အရိယာ၏ ‘အဖြေမှန်’ ကို ရော်ရမ်းကာ နှလုံးသွင်းရခြင်းမျှသာ ဖြစ်လေသည်။ ရော်ရမ်းမှန်းဆခြင်းသည် ၀ိပဿနာအလုပ်မဟုတ်ဟူ၍ ဗုဒ္ဓက အတိအလင်း ဟောတော်မူခဲ့လေသည်။ ၀ိပဿနာအလုပ်သည် ‘စိတ်ညှို့ ’ အတတ် မဟုတ်ချေ။
‘စိတ်ညှို့ ’ အတတ်သည် ၀ိပဿနာအလုပ် မဟုတ်သော်လည်း သမာဓိ (သမထ)နှင့် ယှဉ်သောအလုပ်မျိုးဖြစ်၍၊ လောကီဈာန်၊ အဘိဉာဏ်နှင့် တန်ခိုးအာနိသင်များ ရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြရလေသည်။ အရူပကမ္မဋ္ဌာန်း လေးခုရှိသည့်အနက်၊ နိတ္ထိကိဉ္စိ၊ (ကိဉ္စိ၊ တစ်စုံတစ်ရာမျှ နတ္ထိ၊ မရှိ) ဟူသော ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် အတော် အထက်တန်းကျသော ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်၏။ မြင်ရ ကြားရသည့် အာရုံငါးပါး ရုပ်တရားတို့သည် အဟုတ်တကယ် ဘာမျှမရှိဟု အကြိမ်ကြိမ် စူးစိုက်၍ နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့် ထင်မြင်လာရ၏။ သို့ရာတွင် ဤသို့ထင်မြင်လာခြင်းအားဖြင့်လည်း မဂ်ဆိုက်နိုင်သည်မဟုတ်ချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း (ဥဒယဗ္ဗယ) ဉာဏ်အမြင်လည်း မပါရှိ။ နောက်ဆုံး၌ အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိသော သဘာဝကို မြင်သည်အထိ မပေါက်နိုင်သောကြောင့်ပေတည်း။ ဗုဒ္ဓ၏ မဂ်တရား ဖိုလ်တရားကျင့်စဉ်သည် အလွန်နက်နဲသိမ်မွေ့၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ၀ိပဿနာယောင်ယောင်နှင့် သမထလမ်းစဉ်သို့ ရောက်သွားတတ်ကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။
စိတ်သဘာဝ နံပါတ်(၁) ဆောင်းပါး၌ အနောက်တိုင်းမှ ဆိုက်ကိုလိုဂျီနည်းမျိုးသည် (စိတ်အတတ်ပညာပင်ဖြစ်သော်လည်း) မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သော နည်းမဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့ဖူးရာ၊ ၄င်းပညာကို အနည်းငယ်လေ့လာဖူးသော လူငယ်တစ်ယောက်က မဂ်ဖိုလ်ကိုလိုချင်၍ လေ့ကျင့်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပါဟု လာ၍ပြောဖူးလေသည်။ ဟုတ်ပါပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် အချို့ လူများက ထင်တတ်ကြသည်မှာ အနောက်တိုင်းသားများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၃၀ခန့်ကမှ စိတ်ပညာအကြောင်းကို လေ့လာကြသည်ဖြစ်ရာ၊ ယခုအခါ၌ပင် စိတ်အကြောင်းကို အတော်သိနေကြသည်ဖြစ်၍ နောင် နှစ်ပေါင်း လေးငါးဆယ်ဆိုလျှင် အကြွင်းမဲ့လောက် သိကုန်ကြပြီး၊ မဂ်ပေါက် ဖိုလ်ပေါက် ရောက်နိုင်သည်ဟု ထင်ကြလေသည်။ ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့ခြင်းမှာ ထိုကဲ့သို့ ထင်မြင်ယူဆသော လူများအတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့ခြင်းမျှသာဖြစ်၏။ အနောက်တိုင်းသားများ ဆိုက်ကိုလိုဂျီ (စိတ်ပညာ) လိုက်နည်းနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ စိတ္တနုပဿနာနည်းမှာ အခြေခံအားဖြင့် အကြီးအကျယ် ခြားနားခြင်းရှိ၏။ ဆိုက်ကိုလိုဂျီနည်းမှာ စိတ်သဘာဝအကြောင်းကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း၊ ကြံဆတွေးတောခြင်းတည်းဟူသော အလုပ်ဖြင့် သိရသောပညာဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓ၏ စိတ္တနုပဿနာနည်းမှာ ကြံဆတွေးတောခြင်း၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် သိရသောနည်းမဟုတ်။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် ရှုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်ရသော နည်းဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်လျှင် မည်သို့ခြားနားခြင်း ရှိပါသနည်း။ ဆိုက်ကိုလိုဂျီနည်းဖြင့် သိရသော စိတ်သဘာဝသည် မှားသည်ဟုမဆိုနိုင်။ မှန်ကန်သည်ဟူ၍ပင် ၀န်ခံရပေမည်။ သို့ရာတွင် မှန်ပုံမှန်နည်းမှာ သမုတိသစ္စာနယ်အတွင်း၌ မှန်ကန်ခြင်းဖြစ်၏။ ပညတ်ကို ထိုးဖောက်မသွားနိုင်ချေ။ ဗုဒ္ဓ၏ စိတ္တနုပဿနာနည်းသည်သာလျှင် ပညတ်ကိုထိုးဖောက်၍ ပရမတ္တနယ်အတွင်းသို့ ရောက်နိုင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုက်ကိုလိုဂျီ ဆရာကြီးများသည် စိတ်သဘာဝအကြောင်းကို နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာအောင် လေ့လာ၍ ၄င်းတို့ သိပုံသိနည်းသည်လည်း မှန်ကန်ချင်သလောက် မှန်ကန်စေ၊ မဂ်ဆိုက် ဖိုလ်ဆိုက်မဖြစ်နိုင်ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုရဲသည်။
ရှင်းဦးအံ့။ ဥပမာ ဆိုက်ကိုလိုဂျီ ဆရာကြီးတစ်ယောက်အား အခြားလူတစ်ယောက်က မခံချင်အောင် ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချ၍ စိတ်ဆိုးရသည်ဆိုအံ့။ ၄င်းဆရာကြီးသည် ဤအကြောင်းကို စဉ်းစားမိတိုင်း စိတ်ဆိုးမိခြင်းမှ လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ သတိရ၍ စဉ်းစားမိသောအခါမှ စိတ်ဆိုးရမည်ဆိုခြင်းကို သဘောပေါက်၍ မစဉ်းစားဘဲ နေနိုင်အောင် တတ်နိုင်ကောင်း တတ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း (ဤမျှလောက်ပင် တတ်နိုင်ကောင်းမှ တတ်နိုင်ပေမည်။) စိတ်ဆိုးစရာမဟုတ်သည့်အကြောင်းကို သိရှာမည်မဟုတ်ချေ။ ဗုဒ္ဓ၏ စိတ္တနုပဿနာသမားမူကား ဖြစ်ပြီးသော စိတ်သည် ကုန်ဆုံးပျောက်ပျက်သွားခဲ့ပြီ ဟူသော အခြင်းအရာကို အကြိမ်အကြိမ် အထပ်ထပ် လက်တွေ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ထားသဖြင့် နှလုံးခိုက်အောင် သဘောကျဖူးသည် ဆိုပါစို့။ ထိုသူအဖို့ သတိလစ်သောအခါ၌သာလျှင် စိတ်ဆိုးမည်။ သတိရ၍ မိမိမြင်ပြီးသော အခြင်းအရာကို ဆင်ခြင်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ ဒေါသစိတ် ပြေပျောက်သွားပေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ဆိုက်ကိုလိုဂျီသမား၏ သိခြင်းသည် စဉ်းစားဉာဏ်သက်သက်ဖြင့် သိခြင်းဖြစ်၍ စိတ္တနုပဿနာသမား၏ သိခြင်းသည် ဘာဝနာအဟုန်ကြောင့် သိခြင်းဖြစ်ရာ၊ လောဘ-ဒေါသ စသည်များကို သိမ်းဆည်းရာ၌ ကြီးစွာသော ခြားနားခြင်း ရှိသည်ဟူလို။
မဂ်တရား ဖိုလ်တရားကို ရစကောင်းသည်ဆို၍ အားထုတ်ကြသဖြင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရပြီဟု ယူဆကြသော ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ တို့အား ချဉ်းကပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်၍ အကဲခပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထိုသူတို့၏ မဂ်ဆိုက်ပုံဆိုက်နည်းကို ထားပါဦး။ စိတ်နေသဘောထားကိုလည်း ထားပါဦး။ ဗုဒ္ဓကို သတိရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကဲခတ်ခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အချို့ သော (တရားပေါက်ပြီဆိုသည့်) ယောဂီများ ပြောတတ်ကြသည်မှာ “ဘုရားကြည်ညိုခြင်းအလုပ်သည် တရားအားမထုတ်ချင်သော လူများ၏ အောက်တန်းစား အလုပ်မျိုးဖြစ်သည်။ မိမိတို့လည်း ရှေးယခင်က လုပ်ခဲ့ဖူးသည်” စသည်ဖြင့် ပြောတတ်ကြခြင်းကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် ထိုသူသည် တရားအားထုတ်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားကို အာရုံပြုခြင်းနည်းပါးသည်ဟု ဆိုလိုရာရောက်၏။ ဤအပြုအမူသည် မှန်ကန်ပါ၏လော၊ သဘာဝကျပါ၏လောဟု ဆန်းစစ်ဖို့လိုပေသည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:59 AM0comments Links to this post
(U Tejaniya-Shwe Oo Min Tawya)
သတ္တ၀ါသည် သေရမည်ကို အလွန်ကြောက်၏။ လူလည်း ကြောက်၏။ တိရစ္ဆာန်များလည်း ကြောက်၏။ နွားတစ်ကောင်ကို သားသတ်ရုံသို့ ဆွဲသွင်းသည့်အခါ၊ တတ်နိုင်သမျှ ရုန်းကန်ရှာ၍ မျက်ရည်များ တွေတွေကျစီးခြင်းကို မြင်ရဖူး၏။ သို့ဆိုလျှင် သေခြင်းတရားကို မြင်သည်ဟု ဆိုရမည်လော။ လွန်ခဲ့သော ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း၌ ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ပျံသန်းလာရာတွင် လူများသည် ဗုံးကျင်းများသို့ ပြေးဆင်းကာ ပုန်းအောင်းကြ၏။ အချို့ က မိမိတို့သည် သေခြင်းတရားကို ခဏခဏ သတင်းရ၍ နှလုံးသွင်းပြီး ဖြစ်တော့သည်ဟုပင် ပြော၏။ ဟုတ်ပါ၏လော။ သေမည့်ဘေးကိုလန့်၍ ထွက်ပြေးခြင်းသည် သေခြင်းသဘောတရားကို သိခြင်း ဟုတ်ပါ၏လော။ ခိုကိုးရာ ရှာကြခြင်းသည် သေခြင်းသဘောတရားကို နှလုံးသွင်းခြင်း မည်ပါ၏လော။ “နဂါးသည် မြေကိုမမြင်၊ ငှက်သည် လေကို မမြင်၊ သတ္တ၀ါသည် သေခြင်းသဘောတရားကို မမြင်” ဟူသော စကားအဓိပ္ပါယ်ကို မည်သို့ ကောက်ယူပါမည်နည်း။
စင်စစ်သော်ကား သတ္တ၀ါသည် သေခြင်းသဘောတရားကို မမြင်ဟူသော စကားသည် မှန်ကန်၏။ သေဘေးကို ကြောက်သောကြောင့် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးခြင်းသည် သေခြင်းသဘောတရားကို မြင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟူသော စကားမူကား မမှန်ကန်ချေ။ တစ်နေ့နေ့၌ သေရမည်ဆိုခြင်းကို ဘယ်သူမှ မငြင်းသော်လည်း ဤနည်းဖြင့် သေခြင်းသဘောတရားကို မြင်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ တစ်နေ့နေ့၌ သေရမည်ဆိုခြင်းကို မငြင်းသော်လည်း ဘယ်တော့မှ မသေရတော့မည်ကဲ့သို့ ပြုမူကျင့်ကြံလျက် ရှိကြသည်ကို တွေ့မြင်ကြရသည် မဟုတ်ပါလော။ လောဘမီး၊ ဒေါသမီး တောက်လောင်ကြရခြင်းများသည် အချိန်မရွေး သေနိုင်သည်ဟူသော မရဏသဘာဝကို မမြင်ကြသောကြောင့် မဟုတ်ပါလော။ နက်ဖြန်တွင် ကြိုးစင်တက်ရမည်ဟု အမိန့်ချထားသော တရားခံသည် ဤအရာ ထိုအရာများကို လိုချင်သည်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းချင်သည် ဟူသော စိတ်မျိုး ဖြစ်နိုင်ပါမည်လော။ မရဏသဘာဝကိုသိ၍ အချိန်မရွေးသေနိုင်သည်ဟု သတိပြုသောသူသည် အထက်ပါတရားခံကဲ့သို့ ပစ္စည်းဥစ္စာ လိုချင်တောင့်တမှုမျိုး ယုတ်လျော့ရမည် မဟုတ်ပါလော။ ဤသို့ဆိုခြင်းဖြင့် တရားခံသည် မရဏသဘာဝကို သိမြင်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ မိမိသေရတော့မည့်အရေးကို တွေး၍ပူပန်ခြင်းသာ ဖြစ်သောကြောင့် တန်ဖိုးမရှိချေ။ တန်ဖိုးရှိသော နှလုံးသွင်းတရားမှာ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိစဉ်အခိုက်၌ပင် အချိန်မရွေး သေတတ်ခြင်းတည်းဟူသော သဘာဝကို သတိပြုတတ်ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
အချို့ က သေခြင်းတရားကို မစဉ်းစားလေနှင့်၊ စိတ်ပူတတ်သည်၊ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေခြင်းဖြင့်သာလျှင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ပြောတတ်ကြသည်။ ထိုလူမျိုးကား ဗုဒ္ဓ၏သြ၀ါဒကို ကျောခိုင်းသော လူမျိုးဖြစ်ရုံသာမက အလွန်မွန်မြတ်သော ‘သန္တိသုခ’ အကြောင်းကို အလျဉ်းနားမလည်သူများသာ ဖြစ်ကြလေသည်။ လောက၌ လိုချင်စရာတွေ အလွန်ပေါများ၍ လိုချင်သောအရာကို ရပါမှ ပျော်စရာကောင်းသည်။ စိတ်ချမ်းသာသည်ဟု ယူဆသော လူများအဖို့မှာ လိုချင်တတ်သော လောဘတရား ခေါင်းပါးလျော့နည်းသွားမည်ကိုပင် စိုးရိမ်ရှာကြ၏။ လျော့နည်းအောင် ကြိုးစားစကောင်းသည် ဟူ၍လည်း သဘောမပေါက်၊ နားမလည်ကြချေ။ ထိုလူများအဖို့ကား (သန္တိသုခဖြစ်သော) နိဗ္ဗာန်တရားသည် ဝေးလှသေး၏။ မတတ်နိုင်၍သာ လောဘရှိနေသည်။ လောဘနည်းလျှင် ကောင်းလေစွဟု သဘောပေါက်သောလူ အနည်းငယ်အဖို့သာ ဗုဒ္ဓ၏သြ၀ါဒသည် သင့်လျော်ပေလိမ့်မည်။ လောဘအတွက်မှာ မရဏသဘောသည် ‘ဆေး’ မည်၏ဟု ဗုဒ္ဓဟောတော်မူ၏။ သေတတ်သည့်သဘာဝကို နှလုံးသွင်းလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်၊ လိုချင်မှု လျော့ကျသွားသည်ကို တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဗုဒ္ဓ၏ဆေးနည်းကို ယုံမှားစရာ ဘာမျှမရှိချေ။ သို့ရာတွင် လိုချင်သောအရာကိုရမှ ပျော်နိုင်သည်ဆိုကာ လောဘလျှော့နည်းရန် အလိုမရှိသော လူများအဖို့မူကား မရဏ သဘောတရားကို နှလုံးသွင်းဖို့ မလို ဆိုခြင်းမှာ ဟုတ်ပါပေလိမ့်မည်။
သတ္တ၀ါသည် သေခြင်းတရားကို မြင်နိုင်ခဲသောကြောင့် သိလျှင်ကိစ္စပြီးသည်ဆိုသော ‘တရားသမား’များသည် တစ်နေ့နေ့တွင် သေရမည်ဟု ‘သိ’သည်ဆို၍ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနေကြကာမူ၊ တန်ဖိုးရှိသော အသိဉာဏ်မျိုးမဟုတ်။ သူလိုငါလို သိပုံသိနည်းမျှသာဖြစ်၍ တကယ့်ဘေးနှင့် တွေ့ကြုံသည့်အခါ မျက်လုံးဝိုင်းကြပေလိမ့်မည်။ သေခြင်း၏ အခြင်းအရာကို အထပ်ထပ် အဖန်ဖန် ဆင်ခြင်သုံးသပ်၍ မရဏသဘာဝကို အဟုတ်တကယ် သိမြင်ထားသော ယောဂီအဖို့မူကား (အာသဝေါကင်းပြီးသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း လုံးဝမရှိဟု မဆိုနိုင်စေကာမူ) သူလိုငါလို လူများထက် သက်သာရာရနိုင်သည် ဆိုခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓ၏ အာမခံချက် ဖြစ်လေသည်။
ဤနေရာ၌ လှမ်းလိုက်သောခြေထောက်သည် ချလိုက်သောအခါ၌ မရှိတော့၊ ပျောက်ပျက် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့လေပြီဟူသော နှလုံးသွင်းတရားမျိုး အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တဖန် ပြန်ကောက်ရပေဦးမည်။
စင်စစ်အားဖြင့် သေခြင်းသဘောတရားသည် အတော်ထင်ရှားသော သဘောတရားကြီးဖြစ်၏။ ဘိုးဘေးဘီဘင်များ သေဆုံးကုန်ကြခြင်းကိုလည်း သိကြပြီးဖြစ်၏။ ညီအစ်ကို မောင်နှမနှင့် မိဘများ သေဆုံးခြင်းကို မျက်စိအောက်တွင် တွေ့မြင်ကြသူများလည်း ရှိကြ၏။ စစ်ကြီးအတွင်း၌ ဤပြည်၊ ထိုပြည်များမှ အမြောက်အမြား သေကြေပျက်စီးကြခြင်းအကြောင်းလည်း ကြားကြရ၏။ အိမ်နီးချင်းများ သေကြေခြင်း၊ တစ်ရွာတည်း တစ်မြို့ တည်း အတူနေကြသူများ သေကြေခြင်းကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တွေ့မြင်ကြရ၏။ ဤမျှလောက် ထင်ထင်ရှားရှားကြီး သေကြေပျက်စီးနေကြသော အခြင်းအရာကို နေ့ရှိသမျှ မြင်တွေ့နေကြရပါလျက်နှင့်ပင် မရဏသဘာဝကို မဟုတ်တကယ် မမြင်နိုင်ကြ၊ မသိနိုင်ကြကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ရာ၊ ကိုယ်တိုင်မမြင်နိုင်ဘဲ မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အပြောစကားကို မှတ်သားကာဖြင့် “ကြွလိုက်သောခြေထောက်သည် ချလိုက်သောအခါ၌ မရှိတော့၊ ပျောက်ပျက် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့လေပြီ” ဟူသော “အဖြေမှန်” ကို နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့် မည်မျှလောက် ခရီးရောက်နိုင်မည်ကို စဉ်းစားချင့််ချိန်ကြဖို့ ကောင်းလှသည်။ ခဏခဏမြင်ကြသော မရဏသဘာဝကိုပင် ထိုးထွင်း၍ မမြင်တတ်ကြပါဘဲလျက်၊ ဘယ်တော့ကမှ မမြင်ဖူးသည့် လှမ်းပြီးရင်း ပျောက်သည်ဆိုသော ခြေထောက်အချင်းအရာကို မြင်နိုင်ဖို့ အဆများစွာ ခဲယဉ်းလိမ့်မည် မဟုတ်ပါလော။ ဟော၍သာ ဟောတတ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ ၀င်ရောက်လာသည်မှစ၍ ယနေ့တိုင် ထိုနည်းမျိုးဖြင့် ပေါက်ရောက်သူများဟူ၍ ပီပီသသ မကြားရဖူးချေ။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:38 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:36 AM0comments Links to this post
ထိုနည်းတူစွာ ‘ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ’နည်းအတိုင်း လေ့ကျင့်၍ (ရုပ်နာမ်ရှိသည့်အနက်) နာမ်ဘက်သို့ ဦးညွတ်သော ယောဂီသည် မိမိ၏စိတ်ကို စောင့်၍ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်၏သဘာဝကို ယထာဘူတကျကျ သိနိုင်ပါသည်ဆိုလျှင် မယုံကြည်နိုင်စရာမရှိပေ။ သတိဦးစီးလျက် မိမိ၏စိတ်ကို စောင့်ကြည့်သည့်အခါ အသစ် အသစ်ဖြစ်လျက်ရှိသော ‘သိစိတ်’ ကလေးတွေကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ အဆင်း (ရူပါရုံ) ကို သိသောစိတ်၊ အသံကို သိသောစိတ်၊ အရသာကို သိသောစိတ်၊ (တစ်ချက် တစ်ချက် သတိလစ်သည့်အခါ) ကြံစည်တွေးတောသောစိတ် စသည်ဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု၊ တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ် ဖြစ်နေသော အခြင်းအရာကို လက်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ ဤအချင်းအရာကို လူတိုင်းမြင်သည် မထင်လေနှင့်။ သတိနှင့် စောင့်ကြည့်သော ယောဂီသာလျှင် လက်တွေ့မြင်ရသည်။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု သိတတ်သည်ဟု လူတိုင်းနားလည်ပုံရသော်လည်း နာလည်ရုံမျှ နားလည်ခြင်းနှင့် တကယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့ရသော ယောဂီ၏ ကိုယ်တွေ့သိမြင်ခြင်းတို့သည် ကြီးစွာသော ခြားနားခြင်းရှိလေသည်။ (ဤအချက်ကို လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ဖို့ အရေးကြီးသည်။) ခဏချင်း ခဏချင်း အသစ်အသစ်ဖြစ်နေသော ‘သိစိတ်’ ကလေးများပေတကားဟု သဘောပေါက်လာသောအခါ အသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်ဆိုကတည်းက အဟောင်းတစ်ခု ပျောက်ပျက်သွားတော့သည်ဟု ‘လက်တွေ့’ သဘောပေါက်လာတတ်သည်။ လက်စသတ်တော့ ဖြစ်ချည်ပျက်ချည်ဖြစ်နေသော သိစိတ်ကလေးပါတကား၊ အမြဲတစေ တည်ရှိနေသော သိစိတ်ကလေးမျိုး မဟုတ်ပါတကားဟု တစ်ကြိမ်တစ်ခါတွင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သဘောကျသွားတတ်ပေသည်။ ဤကား ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်ပေတည်း။
ဤမျှလောက်တော့ လူတိုင်းသိသည်။ မြစ်ရေအလျဉ်ကဲ့သို့ တစ်သွင်သွင်စီးနေသော စိတ်သဘာဝကို သိပါမှ ဟုတ်လိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓက လက်ဖျစ်တစ်တွက်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်း ချုပ်တတ်သည်ဟု ဟောတော်မူသောကြောင့် ဤမျှလောက် ကြဲကြဲကြီးသိရုံလောက်နှင့် ဘာမျှမဟုတ်သေး စသည်ဖြင့် ပြောတတ်သူများလည်း ရှိကြလေသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြောဟောတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့် မြန်မာပြည်သို့ ဗုဒ္ဓသာသနာရောက်ခဲ့သည်မှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလျက် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆို၍ ဤနောက်ပိုင်းကာလတွင်မှ ကြားကြရခြင်းဖြစ်သည်။ သိစိတ် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်ခြင်းကို အတွေးဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ မျက်ဝါးထင်ထင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ သိလိုက်ရခြင်း၏ တန်ဖိုးရှိခြင်းကို ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ နားမလည်ကြ၊ လက်တွေ့လည်း အလုပ်လုပ်မကြည့်ဘဲ မှန်းဆရမ်းသန်း ပြောဆိုကြခြင်းမျှသာ ဖြစ်လေသည်။ မြစ်ရေအလျဉ်ကဲ့သို့ဟူသော အမြင်မှာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၏ အမြင်ဖြစ်ရာ၊ ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်အဆင့်၌ အဘယ်မှာ အရိယာ၏အမြင်မျိုး မြင်နိုင်ပါဦးမည်နည်း။ အရိယာဖြစ်အောင် အားထုတ်သော ယောဂီသည် ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်လမ်း အတိုင်းပင် သွားရမည် မဟုတ်ပါလော။ အရိယာတို့၏ အမြင်ကို တစ်ခါတည်း မူတည်ပြီး၊ မိမိလည်းမြင်အောင် (လုပ်နည်းမပါဘဲ) လေ့ကျင်ကြသူတို့ များခဲ့ခြင်းအတွက်ကြောင့် မြန်မာပြည်၌ မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရား တိမ်မြှုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
စိတ်အကြောင်းကို ယထာဘူတကျကျ သိလိုလျှင် စိတ်အကြောင်းရေးထားသော စာတွေကိုဖတ်၍ ‘ကိုယ်တွေ့’ အသိမျိုးမသိနိုင်။ မိမိ၏စိတ်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် သိနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ရာ၊ ရုပ်အကြောင်းကို သိလိုလျှင်လည်း ဤနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။ ‘ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ’နည်းအတိုင်း လေ့ကျင့်၍ (ကာယ)ဘက်သို့ ဦးလှည့်သော ယောဂီသည် ကာယကို စောင့်ကြည့်သော အလေ့အကျင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ဣရိယာပထ ဣရိယာပုတ် အပြောင်းအလဲနှင့်တကွ ကိုယ်ကာယ၏ လှုပ်ရှားမှု၊ ဖောက်ပြန်မှုဟူသမျှကို သတိနှင့် စောင့်၍ကြည့်ရသည်။ မိမိက ခုနက ကိုယ်ကာယကြီးမရှိတော့ဘူး၊ ယခုအသစ်ဖြစ်လာပြီဟူ၍ (အရိယာတို့မြင်သော အခြင်းအရာကို) ကြိုတင်ပြီးနှလုံးသွင်းရန်မဟုတ်။ မိမိ၏ အလုပ်မှာ ပြောင်းလဲတိုင်း ပြောင်းလဲတိုင်း သတိမပြတ်စေအောင် စောင့်ကြည့်ပြီး ကြည့်ရန်မျှသာဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်က မမြင်သေးဘဲ၊ အရိယာတို့မြင်သော (အဖြေမှန်) အဖြစ်ကို ကြိုတင်ပြီး စိတ်ကူးခြင်းသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ‘ညှို့ ’ခြင်း (auto suggestion) မျှသာဖြစ်၍ လူအများထင်ကြသလောက် ခရီးမရောက်တတ်ချေ။ စိတ်ကူးဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကြီး ပျက်ကျနေသည်ဆိုခြင်းသည် စိတ်ကူး (imagination) မျှသာဖြစ်၍ တကယ့်ဉာဏ်အမြင် မဟုတ်သေးချေ။ ဆိုလိုရင်းမှာ ယောဂီ၏အလုပ်သည် အပြောင်းအလဲဟူသမျှကို သတိနှင့် ရှုကြည့်ရန်မျှသာဖြစ်ရာ၊ ပျက်ကျခြင်းစသော အခြင်းအရာများကို မြင်ရန်မှာ မိမိက တတ်နိုင်သည်မဟုတ်၊ ရင့်ကျက်သောအခါ၌ အလိုအလျှောက် ပေါ်လာရသော ဉာဏ်အမြင်မျှသာဖြစ်သည်ဟူလို။
အလိုအလျှောက် ပေါ်ရသော ဉာဏ်အမြင်
ကာယနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်၌ ဗုဒ္ဓက (ဣရိယာပထပိုင်းတွင်) ထိုင်ခြင်း၊ ထခြင်း၊ လဲလျောင်းခြင်းမှစ၍ လည်ပင်းကို စောင်းငဲ့ခြင်းတိုင်အောင် သိစေရမည်ဟု ဟောတော်မူ၏။ လည်ပင်းကို စောင်းငဲ့သည့်အခါ စောင်းငဲ့သည်ဟူ၍ ‘ပဇာနာတိ’ သိစေရမည်ဟု ဟောတော်မူ၏။ အချို့ က ပဇာနာတိ၊ သိရမည်ဆိုခြင်းအားဖြင့် သိရုံမျှကလေးသိစေရမည်မဟုတ်၊ ဓာတ်လေးပါး အစုအဝေးဖြစ်ခြင်း၊ မမြဲသောသဘောတရားရှိခြင်း စသည်တို့ကိုပါ သိစေရမည်ဟု ဋီကဖွင့်တတ်ကြသည်။ သတိပဋ္ဌာန်ဟူသောအလုပ်မှာ ဤအရာများကို နှလုံးသွင်းရန်အတွက် ဗုဒ္ဓက ဟောတော်မူခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ သတိယှဉ်သောစိတ်မျိုး အမြဲရှိစေရန် တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဟောတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်နားလည်သည်။ သတိယှဉ်သော စိတ်မျိုးဖြစ်အောင် လုံလောက်စွာ လေ့ကျင့်ထားသော ယောဂီအဖို့၌ ဖြစ်ချည်ပျက်ချည်ရှိနေခြင်း၊ မမြဲခြင်း၊ အစိုးမရခြင်း၊ ငါမဟုတ်ခြင်း၊ အနှစ်သာရမရှိခြင်းစသော အဖိုးထိုက်သည့် ဉာဏ်အမြင်မျိုးတို့ သည် အလိုအလျှောက် ပေါ်ပေါက်လာရမည် ဖြစ်လေသည်။ အဆိုပါ ဉာဏ်အမြင်မျိုးကို မိမိက ခေါ်ယူ၍ ရသည်မဟုတ်။ သဒ္ဓါ၊ ၀ီရိယ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည်းဟူသော ဗိုလ်ငါးပါးတို့ ညီမျှသောအခါ၌ ဘွားခနဲ ဖြစ်ပေါ်လာရသော ဉာဏ်အမြင်မျိုးမျှသာ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
အချို့ က ပြောတတ်ကြသေးသည်ကား၊ ထိုင်လျှင်ထိုင်ခြင်းကို လည်ကောင်း၊ ထလျှင် ထခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ လူတိုင်းလည်းသိသည်။ တိရစ္ဆာန်များပင် သိကြသည်ဆို၏။ ဤလူများကား ဗုဒ္ဓ၏ သတိပဋ္ဌာန်အလုပ်အကြောင်းကို အလျဉ်းနားမလည်သော သူများသာဖြစ်ကြသည်။ ထိုင်ခြင်း ထခြင်းကို လူလည်းသိသည်။ တိရစ္ဆာန်လည်းသိကြသည်ဆိုရာ၌ တိရစ္ဆာန်နှင့်အတူတူ သိခြင်းမျိုးကို ဗုဒ္ဓရည်ရွယ်တော်မူခြင်း မဟုတ်ချေ။ ထိုင်လျှင် ထိုင်သည်ဟု သိတတ်ကြခြင်းကား မှန်သည်။ သို့ရာတွင် အမှတ်မဲ့သိကြခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဆိုလိုတော်မူသည်မှာကား သတိနှင့်ယှဉ်သော သိခြင်းမျိုး၊ ကိုယ်ကာယပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ရာတွင် တောင်ဟာ မြောက်ဟာတွေ မစဉ်းစားတော့ဘဲ ထိုင်တော့မည်ဆိုလျှင် ထိုင်တော့မည့်အဖြစ်ကို သတိစောင့်သောစိတ်ဖြင့် ထပ်၍သိခြင်းကို ဆိုလိုတော်မူသည်။ သတိနှင့် စောင့်ပြီး ထပ်၍သိခြင်းမျိုးကိုမူ တိရစ္ဆာန်မဆိုထားဘိ၊ အထပ်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များပင်လျှင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ သိဖူးဟန်မတူသောကြောင့် ဤစကားမျိုး ပြောရဲခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
သိလျှင် ပြီးသည်ဟူသော အယူ
တရားသမားတစ်မျိုးရှိသေးသည်ကား ဗုဒ္ဓ၀ါဒအရမှာ သိလျှင်ပြီးသည်။ အလုပ်လုပ်နေဖို့ (တရားအားထုတ်ဖို့) မလို။ မသိသေးသော လူများသာ အားထုတ်ဖို့ လိုသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤအယူအဆသည် ဟုတ်သလိုလိုနှင့် မှားသော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်၏။ သိလျှင် ကိစ္စပြီးနိုင်သည် ဆိုခြင်းမှာ ဟုတ်သယောင်ယောင် ထင်ရ၏။ ဗုဒ္ဓကလည်း အသိဉာဏ်ပင် အရေးကြီိးသည်ဟု ဟောတော်မူချက် ရှိပေသည်။ သို့ရာတွင် မည်သို့သော သိပုံသိနည်းမျိုးကို ဆိုလိုပါသနည်း။ (၀ိညာဉ်သိ၊ သညာသိ၊ ပညာသိအကြောင်းကို ယခင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၌ ရှင်းပြခဲ့ဖူးရာ ကျွန်ုပ်၏ ရှင်းလင်းချက်ကို လက်မခံချင်သူများ ရှိနေသောကြောင့် ၄င်းအခေါ်အဝေါ်များကို မသုံးဘဲ သဘာဝသက်သက်ဖြင့် တင်ပြပါတော့မည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:51 AM0comments Links to this post
ကျွန်ုပ်တွေ့သော စိတ်သဘာဝ (၇)
၀ိပဿနာအလုပ်ဟူသည်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညှို့ သော စိတ်ညှို့ အတတ်မျိုး (auto suggestion) မဟုတ်ခြင်း။
သိလျှင် ကိစ္စပြီးသည် ဆိုသူများ၏ အယူဝါဒကို ချေပခြင်း။
တရား ‘ပေါက်ပြီ’ ဆိုသူများသည် ဗုဒ္ဓအား ကြည်ညိုမှု လျော့ပါးစကောင်းသလော။
ဤခေတ်မှာ မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရားများ စိတ်ဝင်စားတတ်သူ အတော်အတန် ပေါများ၍ အချို့ သောတရားပွဲများတွင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားဟောကြားမည်ဟု ကြေငြာခြင်းများလည်း ကြားရ၏။ ထိုကဲ့သို့ ထုတ်ဖော်ကြေငြာသော တရားပွဲမျိုးဆိုလျှင် အခါအခွင့်သင့်တိုင်း ကျွန်ုပ်လည်း သွားရောက်ကြားနာတတ်၏။ ဟောပြောကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ များသောအားဖြင့် စာတတ်ပေတတ် ထေရ်ကြီးဝါကြီး နာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးများ ဖြစ်ကြပါပေသည်။ အခြားသော စကားများဖြင့် ပလ္လင်ခံပြီးနောက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား (လက်တွေ့အလုပ်ဟူ၍) ဟောပြောကြရာတွင် မည်ကဲ့သို့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမည် ဆိုသူများလည်း ပါရှိ၏။ ၄င်းတို့ ဟောပြောလေ့ရှိသည်ကား ဥပမာ “ထမင်းစားနေခိုက်၌ လှမ်းယူလိုက်သော လက်သည် ရုပ်သိမ်းလိုက်သောအခါ၌ မရှိတော့၊ ပျက်သွားခဲ့လေပြီ။ ထမင်းတစ်လုတ် ခွံ့ရန်အတွက် ဟလိုက်သောပါးစပ်သည် ၀ါးလိုက်သောအခါ၌ မရှိတော့၊ ပျက်သွားခဲ့လေပြီ။ ထိုအခြင်းအရာကို မြင်အောင်ရှုရမည်။ လမ်းလျှောက်သောအခါ၌လည်း လှမ်းလိုက်သောခြေထောက်သည် ချလိုက်သောအခါ၌ မရှိတော့၊ ပျက်သွားခဲ့လေပြီ။ ထိုအခြင်းအရာကို မြင်အောင်ရှုရမည်” စသည်ဖြင့် ဟောကြားသည်ကို ကြားနာရဖူးလေသည်။ ဟောပြောသောပုဂ္ဂိုလ်သည် ထိုကဲ့သို့မြင်သည်ဟု ၀န်မခံနိုင်သေး။ ကြားနာသောပရိသတ်မှာလည်း ဟောပြောပုံရှင်းပါပေသည်ဆိုကာ ထင်မြင်သူ ရှားပါးလှပေလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်... အထက်ပါဆင်ခြင်နည်းသည် ‘နွားရှေ့ ထွန်ကျူး’ ဆိုသော စကားပုံကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ လုပ်နည်းမပါဘဲ အဖြေကို ဖော်ထုတ်၍ ဖြေခြင်းကဲ့သို့ လည်းကောင်း ဖြစ်နေပေသောကြောင့်တည်း။
ရှင်ဦးအံ့။ ဂဏန်းတွက်ချက်သောအခါ၌ အဖြေကိုဖြေပြ၍ မှတ်သားထားရုံနှင့် တွက်တတ်ပြီဟုမဆိုနိုင်။ လုပ်နည်းပါနားလည်၍ အဖြေမှန်ရအောင် တွက်ချက်နိုင်သော အခါမှသာ တွက်တတ်ပြီဟု ဆိုသင့်ခြင်းကို လူတိုင်း လက်ခံကြပေလိမ့်မည်။ ဥပမာ-စပါးတင်း ၁၀၀လျှင် ၂၈၅ကျပ်နှုန်းနှင့် စပါး ၁၃တင်းအတွက် မည်မျှကျသင့်ပါသနည်းဟု သိလိုလျှင် ဘုံသုဉ်းကိန်းတွက်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် ‘မိန်းမတွက်’ တွက်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တွက်တတ်ရပေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ၊ ၁၃တင်းအတွက် ၃၇ကျပ်နှင့် ၅ပြားကျသည်ဟု ဖြေဆိုနိုင်စေဦး။ အဘယ်ကဲ့သို့ တွက်သနည်းဟု မေးသည့်အခါ ‘ဟိုတစ်ခါတုန်းက ရောင်းဖူးလို့ မှတ်ထားတာပဲ’ ဟုဖြေဆိုသော လယ်သမားသည် တွက်ချက်တတ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ စပါး၁၃တင်းအတွက် ၃၇ကျပ်နှင့် ၅ပြားကျခြင်းသည် မှန်ကန်သော်လည်း ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ၊ တင်းရေကို ပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ ၄င်းလယ်သမားသည် အဖြေမှန်ကို ဖြေနိုင်တော့မည် မဟုတ်ချေ။
၀ိပဿနာရှုရာ၌လည်း လှမ်းသောခြေထောက်သည် ချလိုက်သောအခါ၌ မရှိတော့၊ ပျက်စီးသွားခဲ့လေပြီဆိုခြင်းမှာ မှန်ကန်သော သဘောတရားပင်ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော်...မိမိမြင်သော အမြင်မဟုတ်။ မြင်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်က ဖော်ထုတ်ပြောထားခဲ့ခြင်းမျှသာ ဖြစ်၏။ ထိုသူမြင်သောအမြင်ကို မိမိကလိုက်၍ မြင်နိုင်သည်မဟုတ်။ အထက်ပါဥပမာတွင် ‘ဘုံသုဉ်းကိန်း’ သို့မဟုတ် ‘မိန်းမတွက်’ တွက်နည်းဖြင့် တွက်တတ်အောင် သင်ထားပါမှ အဖြေမှန်ရအောင် တွက်တတ်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ နာမ်ရုပ်တို့၏ အပျက်တရားကို မြင်တတ်အောင် လုပ်နည်းနှင့်တကွ လေ့ကျင့်ထားပါမှ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် မြင်နိုင်သောအခြေသို့ ရောက်ပေလိမ့်မည်။ ချလိုက်သောခြေထောက်သည် ရှေ့ သို့မပါခဲ့၊ ပျက်သွားခဲ့လေပြီ ဆိုသောနည်းဖြင့် ရှုမှတ်ခြင်းသည် ‘အဖြေမှန်’ကို နှလုံးသွင်းနေခြင်းမျှသာဖြစ်၏။ လုပ်နည်းမပါသည့်အတွက်ကြောင့် ကိုယ်တိုင်မပြောနိုင်အောင် ရှိနေကြလေသည်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း ဟန်မကျဘဲ အဖြေမှန်ကိုချည်း နှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့် ထင်မြင်ပါသည်ဆိုသောသူများသည် ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ညှို့ သောနည်း (auto suggestion) မျှသာဖြစ်၏။ ‘ညှို့ ’ဖန်များသောကြောင့် ထင်မြင်သည်ဆိုလျှင် တကယ့်ဉာဏ်အမြင် မဟုတ်နိုင်။ မြင်သည်ဟု ထင်မှတ်ခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ မှန်သောအဖြေပင် ဖြစ်စေကာမူ ညှို့ သောနည်းဖြင့် ရစကောင်းသည် မဟုတ်။ ညှို့ သောနည်းဖြင့်လုပ်လျှင် အဖြူကို အမဲထင်၍ လာစေနိုင်သောကြောင့် ယထာဘူတကျသော နည်းမဟုတ်နိုင်ချေ။ ခြေလှမ်းတိုင်း ခြေထောက်တွေ ပျက်နေသည်ဟု (ကိုယ်တိုင် မမြင်သေးဘဲ) ရှေ့ မှလမ်းကြောင်းပေးပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်လာအောင် လုပ်ခြင်းသည် ကိုယ့်စိတ်ကို ‘ညှို့ ’သော နည်းမျှသာဖြစ်၍ မှန်ကန်သောသဘာဝကို ထိုးထွင်း၍ မြင်ခြင်းမဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် လုပ်နည်းအမှန်ကို ရှေးဦးစွာ မရှာဘဲ၊ အဖြေကို လက်ဦးနှလုံးသွင်းသော နည်းဖြစ်၍ ‘နွားရှေ့ ထွန်ကျူး’ ဟု ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
သို့ဆိုလျှင် သဘောသဘာဝကို ထိုးထွင်း၍ အမှန်အတိုင်း မြင်နိုင်အောင် အဘယ်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရပါမည်နည်း။ ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့သည့် ‘ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ’နည်းသည် (ခဲယဉ်းပင် ခဲယဉ်းသော်လည်း) မလွဲမချော်နိုင်သောနည်း၊ ယုတ်စွအဆုံး ဉာဏ်ရည်တက်စေသောနည်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှ သက်သာရာရစေနိုင်သောနည်း၊ အမှန်နှင့်အမှားကို ပိုင်းခြားသိမြင်စေတတ်သော နည်းဖြစ်သည်ဟု ရဲရဲကြီး ထောက်ခံလိုက်သည်။ နာမ်ရုပ်တို့၏ သဘာဝကို ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းမရှိပါဘဲလျက်၊ ခြေထောက်ကြီးပျက်နေပါသည်ဟု ကြိုတင်ပြီး ‘စိတ်ညှို့ ’ခြင်းဖြင့် ထင်မှတ်လာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အဘယ်မှာ ယထာဘူတကျနိုင်ပါမည်နည်း။ ရုပ်နာမ်၏ သဘာဝကို ထိုးထွင်းသိမြင်အောင် ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ‘ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ’ နည်းအရ ရုပ်နာမ်ကို စောင့်၍ ကြည့်ခြင်းထက် သေချာသောနည်းသည် အဘယ်မှာ ရှိနိုင်ပါမည်နည်း။
ပမာဆိုသော် လူတစ်ယောက်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိလိုပါသည်ဆိုက ဟိုလူသည်လူများထံမှ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ သူ့ သတင်းကို နာခံခြင်း စသည်တို့ထက် ထိုလူနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မကွဲမကွာ စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် သာ၍သေချာသည်ဟု ၀န်ခံနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပါလော။ ‘လူကောင်းကြီးတစ်ယောက်’ဟူ၍ လူအများက ပြောကြသော်လည်း အတူနေပြီး စောင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ခြင်၊ ကြမ်းပိုးစသည်များကို သတ်ခြင်းလည်း တွေ့ချင်တွေ့ရမည်။ မိမိအား တစ်မျိုးပြော၍ အခြားလူများအား တစ်မျိုးပြောခြင်းများလည်း တွေ့ချင်တွေ့ရမည်။ ဈေးသည်ကမေ့ပြီး ပိုက်ဆံမတောင်းဘဲနေမိ၍၊ ထွက်လာသောအခါတွင် မိမိကသတိရသော်လည်း ပိုက်ဆံကို ပြန်၍မပေးဘဲ နေချင်လည်းနေမည်။ လင်သေကြွှေပူသော မုဆိုးမက ရောင်းချင်သောပစ္စည်းကို ဖိနှိပ်ပြီး ဈေးဆစ်ချင်လည်း ဆစ်မည်။ မမှန်သောစကားကို လူတစ်ယောက်အား ပြောလိုသည့်အခါ စောင့်ကြည့်သူအား မျက်စိမှိတ်ပြပြီး ယုတ္တိယုတ္တာဆင်၍ ပြောချင်လည်း ပြောမည်။ ဤသို့သော အခြင်းအရာများကို အခြားလူများ မသိကြ မမြင်ကြသော်လည်း၊ အမြဲ စောင့်ကြည့်နေသော လူကမူ မြင်နိုင်မည်၊ သိနိုင်မည် မဟုတ်ပါလော။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:03 AM0comments Links to this post
ယခုအခါ ၀ိပဿနရာတရားစခန်း အများစုတွင် ယောဂီများ ပုတီးမစိပ်ကြရန် စည်းကမ်းချက် သတ်မှတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သင့်ပါပေသည်။ တရားစခန်းတွင် တရားအားထုတ်ရေးသည်သာ အဓိကဖြစ်သည်။ တနေ့လုံးလိုလို တရားအားထုတ်ရသဖြင့် ပုတီးစိပ်ချိန် မပေးနိုင်ပေ။ တရားရှုနည်းကိုသာ အဓိက လေ့လာဆည်းပူး အားထုတ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ပုတီးစိပ်ရန် မလိုအပ်ပေ။ ထိုစည်းကမ်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သဘောပေါက်နားလည်၍ ထောက်ခံခြင်းပြုအပ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် တရားစခန်းပြီးဆုံး၍ မိမိတို့နေအိမ်များသို့ ပြန်ရောက်ကြသောအခါ အချို့က စိပ်ပုတီးကို စွန့်လိုက်ကြသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ် တွေ့ရသည်။ စင်စစ် နေအိမ်၌ တရားအားထုတ်မှုကို တစ်နာရီ နှစ်နာရီ စသဖြင့် တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်သာ ကြိုးကြားကြိုးကြား ပြုကျင့်နိုင်ကြသည်။ ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် ပုတီးစိပ်ရန် မလိုတော့ဟု ယူဆကာ ပုတီးကို စွန့်ပယ်လိုက်ကြသည်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်သူသည် စိပ်ပုတီးကိ်ုင်ဆောင်ရန် မလိုတော့ ဟူ၍ အချို့ ခံယူနေကြသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ် မြင်တွေ့နေရသည်။
မူလအစက စိပ်ပုတီးသည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အသုံးပြုသော အသုံးအဆောင်ကား မဟုတ်ပေ။ ဗြဟ္မဏ၀ါဒနှင့် မဟာယာနတို့မှ ဆက်နွယ်လာသည့် တန္တရ၊ မန္တရ ဂိုဏ်းဝင်များ၏ ကိုယ်ပိုင် အသုံးအဆောင်သာ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ရှေးထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာကြီးတို့သည် တန္တရ၊ မန္တရ ဂိုဏ်းတို့၏ ပုတီး အသုံးပြုနည်းကို အတုယူပြီး တီထွင်မှုပြုခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာအရ ဘုရားဂုဏ်စသည့် ဂုဏ်တော်များကို ပွားများရာတွင် ဂုဏ်တော်အရေအတွက်ကိုလည်း သိရ၊ စိတ်တည်ကြည်မှုလည်း ရအောင် စိပ်ပုတီးကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စိပ်ပုတီးအကူအညီဖြင့် ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာကို ပွားများခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဂုဏ်တော်များ ပွားများမှု၌သာမက အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ ဟူသော လက္ခဏာရေးသုံးပါးကို ဆင်ခြင်သည့်အခါတွင်လည်း စိပ်ပုတီးကို တိုးချဲ့ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘွားများ ပြုလာခဲ့သော အစဉ်အလာကောင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထိုအစဉ်အလာကောင်းကို ပစ်ပယ်မည်ဆိုလျှင် အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်သာ ဖြစ်ပေမည်။ တရားစခန်းများမှအပ အခြားနေရာများတွင် မည်သို့ပင် ၀ိပဿနာတရားကို အားထုတ်စေကာမူ အားလပ်ချိန်တွင် စိပ်ပုတီးကိုတော့ လက်စွဲ ပြုသင့်ပေသည်။ ၀ိပဿနာအားထုတ်မှုတွင် အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားသော လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်ပုံအချို့ကို ရှုပါ။ လက်တွင် စိပ်ပုတီးကိုင်ထားသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အလားတူပင် အနာဂါမ်ဆရာသက်ကြီး၏ ဓာတ်ပုံကိုလည်း ရှုပါ။ လက်ထဲတွင် စိပ်ပုတီးကိုင်ထားသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။(အချို့က ထိုအချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုသဖြင့် ယခုခေတ်၌ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် အနာဂါမ်ဆရာသက်ကြီးတို့၏ ဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ကူးယူ ပုံနှိပ်ရာ၌ စိပ်ပုတီးကို ကွန်ပျူတာဖြင့် ပယ်ဖျောက်ထားသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ် တွေ့နေရပေသည်။)
စိပ်ပုတီးနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတောင် အနောက် ပရက္ကမဆရာတော်ဘုရားကြီး အဆုံးအမကို အကျဉ်းချုပ် တင်ပြလိုပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ၀ိပဿနာတရားကို အံ့ချီးဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင် အားထုတ်တော်မူသော ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်သည်။ တနေ့တွင် ဆရာတော်ကြီး၏ မနီးမဝေး၌ ဒကာသုံးဦး စုဝေး စကားပြောနေကြသည်။ စကားဝိုင်း တစ်နာရီခန့် ကြာသောအခါ ဆရာတော်ကြီးက ထိုသုံးယောက်ကိုခေါ်၍-မင်းတို့ကွယ်၊ ကလေးတွေလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြောရမှာ ၀န်လေးလိုက်တာ၊ စကားများနေကြလို့ ဖြစ်ပါ့မလားကွယ်၊ တော်ရုံပြောရ တော်ကြရော့ပေါ့။ စကားပြောနေမယ့်အစား ပုတီးများစိပ်နေကြရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ကွယ်-ဟု ဆုံးမတော်မူသည်။
ထိုအထဲတွင် ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်လေ့ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်း ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က ၀ိပဿနာ အားထုတ်နေသူသည် ပုတီးစိပ်ရန် မလို-ဟု ခံယူထားသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား အထူးရည်ရွယ်လျက် ဆရာတော်ကြီးက ၀ိပဿနာ မည်မျှပွားများ အားထုတ်နေနေ ပုတီးကိုတော့ လက်မလွတ်ရဘူးကွယ့်။ အင်္ဂုတ္တိုရ် ဧကနိပါတ် အဋ္ဌကထာမှာ ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းစီးဖြန်း ငြီးငွေ့လာရင် ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းရမယ်။ ဗုဒ္ဓါနုဿတိပွားများလို့ စိတ်ကြည်လင်လာတဲ့အခါကျမှ မိမိအားထုတ်နေကျ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပြည်လည်ပွားများ အားထုတ်ရမယ်။
ဥပမာ-ခွန်အားဗလနှင့်ပြည့်ဝတဲ့ သစ်ခုတ်သမားယောက်ျားဟာ သစ်ပင်မပြတ်ခင် ရဲတင်းကျိုးပဲ့သော် ပန်းပဲသို့ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး သစ်ပင်ကို ပြန်လည်ခုတ်ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီတော့ ပန်းပဲနှင့်တူတဲ့ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို လွှင့်ပစ်ထားလို့ မရဘူးကွယ့်။ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းတဲ့အခါမှာလဲ ပုတီးနဲ့က ပိုပြီး သမာဓိရတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓါနုဿတိကို လက်မလွတ်သလို ပုတီးကိုလဲ လက်မလွှတ်ရဘူးကွယ့်။ ဟူ၍ ရှင်းပြမိန့်တော်မူခဲ့ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိပဿနာတရားကိုလည်း အားထုတ်ကြရပါမည်။ စိပ်ပုတီးကိုလည်း မပစ်ပယ်သင့် ကြပါ။ အရာရာတွင် အစွန်းမရောက်ဘဲ မဇ္ဈိမပဋိပဒါတည်းဟူသော လမ်းမှန်ကို ကျင့်သုံးတော်မူနိုင်ကြပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
(မြတ်မင်္ဂလာ ၂၀၀၃-ခု မတ်လ)
အနောက်ပရက္ကမ ဆရာတော်ကြီးနှင့် စိပ်ပုတီး
စစ်ကိုင်းတောင် အနောက်ပရက္ကမဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ဏ္ဏာစာရ (၁၂၆၈-၁၃၃၇) သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တွင် အနောက်ပရက္ကမချောင်၌ ဘိုးသက်ရှည်၊ ဘိုးလုံး၊ ဦးကျော်စိုးတို့သည် ဆရာတော်နှင့် မနီးမဝေးတွင် စုဝေးစကားပြောနေကြ၏။ စကားဝိုင်း တစ်နာရီခန့်ကြာသောအခါ ဆရာတော်ကြီးက ထို ၃-ယောက်ကိုခေါ်၍ "မင်းတို့ကွယ်၊ ကလေးတွေလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြောရမှာ ၀န်လေးလိုက်တာ၊ စကားများနေကြလို့ကွယ် ဖြစ်ပမလား။ တော်ရုံပြောကြ တော်ကြရော့ပေါ့။ စကားပြောနေမယ့်အစား ပုတီးများစိပ်နေကြရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ကွယ်"ဟု ကရုဏာရောယှက်ပြီး ညည်းညူသံပါ ဖက်၍ မိန့်မြွက်ပြောဆို၏။
သို့ပြောဆိုရာမှ ဆရာတော်ကြီးက မောင်လုံး ပုတီးပါလား-ဟုမေး၏။ ဘိုးလုံးသည် ပုတီးမကိုင်သည်မှာ နှစ်အတော်ကြာပြီဖြစ်၏။ သူသည် ၀ိပဿနာယောဂီတဦးဖြစ်၍ ပုတီးမကိုင်၊ ၀ိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းချည်း ဦးစားပေးထိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ပုတီး ပါမလာ။ ဆရာတော်ကြီးက မေးနေပြန်တော့လည်း ပုတီးမကိုင်ကြောင်း မလျှောက်ဝံ့၍ ပုတီးရှိပါတယ်ဘုရား-ဟု လျှောက်ထား၏။
ဆရာတော်ကြီးက ရှိရင် ပါသလား-ဟု မေး၏။ ဘိုးလုံးလည်း ကွယ်ဖုံး၍ မရတော့မှန်း သိသဖြင့် အိမ်မှာရှိပါ တယ်ဘုရား-ဟု လျှောက်၏။ ဆရာတော်ကြီးက အေး မင်းလိုဖြင့်ကွယ် ဈေးထဲမှာ ပုတီးတွေအများကြီး ရှိတာပေါ့-ဟု မိန့်တော်မူပြီး အရွယ်ကြီးလာရင် ပုတီးဆောင်ရမယ်။ ၀ိပဿနာ မည်မျှပွားများအားထုတ်နေနေ၊ ပုတီးကိုတော့ လက်မလွှတ်ရဘူး။ အင်္ဂုတ္တိုရ် ဧကနိပါတ် အဋ္ဌကထာမှာ ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းစီးဖြန်း ငြီးငွေ့လာရင် ဗုဒ္ဓါနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းရမယ်။ ဗုဒ္ဓါနုဿတိပွားများလို့ စိတ်ကြည်လင်လာတဲ့အခါကျမှ မိမိအားထုတ်နေကြ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပြန်ပွားများအားထုတ်ရမယ်။
ှုဥပမာ-ခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ သစ်ခုတ်သမားယောက်ျားဟာ သစ်ပင်မပြတ်ခင် ရဲတင်းကျိုးပဲ့တဲ့အခါ ပန်းပဲမှာ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး သစ်ပင်ကို ပြန်လည်ခုတ်ရသလိုပါပဲ။ အဲဒီတော့ ပန်းပဲနဲ့တူတဲ့ ဗုဒ္ဓါနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းကို လွှတ်ပစ်ထားလို့မရဘူးကွဲ့။ ဗုဒ္ဓါနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းတဲ့အခါမှာလည်း ပုတီးနဲ့က ပိုပြီး သမာဓိရတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓါနုဿတိ လက်မလွှတ်သလို ပုတီးကိုလည်း လက်မလွှတ်ရဘူး-ဟု အမိန့်ရှိ၏။
ဘိုးလုံးကို ဆုံးမပြီးလျှင် ဆရာတော်ကြီးက ဦးကျော်စိုး-အား ပုတီးပါလား-ဟု မေး၏။ ဦးကျော်စိုးက လည်ပင်းမှပုတီးကို ကပျာကသီဖြုတ်၍ ပြလေ၏။ ဆရာတော်ကြီးသည် ဦးကျော်စိုးအားလည်း ပုတီးစိပ်ရန် တိုက်တွန်းပြန်၏။ ထို့နောက် ဘိုးသက်ရှည်အား ပုတီးပါလား-ဟု မေးပြန်၏။
ဘိုးသက်ရှည်ကလည်း မရှိပါဘုရား-ဟု ရိုးသားစွာ လျှောက်၏။ အရင်ကရှိပါတယ်၊ ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ-ဟု ထပ်မံမေးပြန်၏။ ဘိုးသက်ရှည်က ရှဉ့်ချီသွားလို့ပါဘုရား-ဟု အမှန်ကို လျှောက်ထားလိုက်၏။ ဆရာတော်ကြီးက ဒါဖြင့် မောင်ရီ-လာလျှင် ပုတီးမှာလိုက်။ ပုတီးက ရှိမှဖြစ်မယ်-ဟု မိန့်တော်မူလေသည်။
အကိုး။ ။ စစ်ကိုင်းတောင် အနောက်ပရက္ကမဆရာတော်၏ ဖြစ်စဉ်နှင့် ကျင့်စဉ်များ။(အရှင်စာရိန္ဒ၊ ဓမ္မာစရိယ)
(မြတ်မင်္ဂလာ ၂၀၀၉-ခု ဒီဇင်္ဘာလ)
(မင်္ဂလာသတင်းစဉ် မှ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:58 AM2comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Rosery Beans
Q&A With Dr. Daw Thynn Thynn
Suppose you are driving. You have to pay attention to the driving, don't you?
Your mind has to be there at the time and place of driving, concentrating on the road, watching the other drivers. You cannot afford to be distracted too much by other thoughts. It is something like meditation on the task at hand. But often we do not carry out other tasks in this concentrated way.
The same is true even in passive activities. Suppose you are sitting onabus.
Try simply to be where you are, rather than letting your mind wander. Train your mind to focus on your surroundings. Be aware of the other people on the bus, how fast the bus is going, and where it is going. This isavery good way to start meditation. Simply be where you are rather than letting your mind roam.
For goodness sakes, staying with the moment is onlyafigure of speech. It is notacommandment to be followed rigidly. This is notaproficiency test. You must understand this from the outset; otherwise you will be tied up in knots trying too hard every second of the day.
If you become too involved with staying in the moment, you lose the art of living -- of free flowing.
If you can be mindful without judgments and without likes and dislikes, then you are practicing with an inner silence or equanimity, called upekkha in Pali.
From "Living Meditation, Living Insight" By Dr. Daw Thynn Thynn
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:47 AM0comments Links to this post
တဖန်ဝေဒနာကို ဦးစားပေး၍ ရှုသော ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ နည်းလမ်းရှိသေး၏။ အပြင်မှ တိုက်ခတ်သော ရူပါရုံ၊ သဒ္ဒါရုံစသည်တို့နောက်သို့မလိုက်ဘဲ၊ မိမိကိုယ်၌ ခံစားလျက်ရှိသော ဝေဒနာကို ရှုလိုသည်ဆိုအံ့။ မည်သည့်အချိန်အပိုင်းအခြား၌ဖြစ်စေ၊ သတ္တ၀ါသည် ဝေဒနာ တစ်မျိုးမျိုးကို ခံစားလျက်သာရှိ၏။ သုခသော်လည်းကောင်း၊ ဒုက္ခသော်လည်းကောင်း၊ သောမနဿသော်လည်းကောင်း၊ ဒေါမနဿသော်လည်းကောင်း၊ ဥပေက္ခာသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခုသောအချိန်အပိုင်းအခြားတွင် တစ်မျိုးမျိုး ခံစားလျက်ရှိ၏။ သုခဝေဒနာသည် မည်သို့ရှိလေသနည်းဟု အခြောက်တိုက်တွေးတောမှန်းဆနေရန်မဟုတ်။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် ဆတ်ဆတ် ခံစားလျက်ရှိသော ဝေဒနာကို ရှုရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အနာရောဂါမျှ မရှိသော သူတစ်ယောက်သည်ပင် ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက် မိမိကိုယ်၌ ခံစားလျက်ရှိသော ဝေဒနာတစ်ခုခုကို ရှာတတ်လျှင် တွေ့မည်သာဖြစ်၏။ တစ်စုံတစ်ရာ ဘာမျှမဖြစ်ပါဟုဆိုလျှင် ဥပေက္ခာဝေဒနာမျိုးဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ဘာမျှမဖြစ်ဆိုသော ဥပေက္ခာဝေဒနာဟူသည် ဘယ်လိုရှိနေသနည်းဟု မိမိကိုယ်၌ စူးစိုက်ရှာလိုက်လျှင် တွေ့ရမည်သာ ဖြစ်လေသည်။ ဥပေက္ခာဝေဒနာ ခံစားပုံကို တစ်ကြိမ်တွေ့အောင် ရှာတတ်ပြီးနောက် အာရုံပြုတိုင်း တွေ့လိမ့်မည်သာဖြစ်၏။
ထို့နောက်တွင် ၀မ်းသာခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းစသော ဝေဒနာများသည် တစ်လှည့်တစ်ပတ်စီ ပြောက်ကျားပြောက်ကျား ရံဖန်ရံခါ ပေါ်လာတတ်သည်ဖြစ်ရာ ပေါ်လာတိုင်း၊ ပေါ်လာတိုင်း ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် သတိနှင့်ရှုခြင်းသည် ယောဂီ၏အလုပ်ဖြစ်၏။ စိတ္တနုပဿနာအလုပ်သည် စိတ်သဘာဝကို ယထာဘူတကျကျ သိစေရန်အတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့ ဝေဒနာကိုရှုခြင်းသည်လည်း ဝေဒနာ၏သဘာဝကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေရန်ဖြစ်၏။ ဝေဒနာတို့၏ပြောင်းလဲပုံ၊ အခိုက်အတန့်မျှ ပေါ်လာပုံ၊ အမြဲမဟုတ်ပုံ၊ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ပုံတို့ကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေရန်အတွက်ဖြစ်၏။ ဤစကားသည် ယုတ္တိတန်မတန် စဉ်းစားသင့်လှသည်။
အချို့ သောယောဂီများသည် မိမိတို့ကိုယ်၌ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတည်းဟူသော ဒုက္ခဝေဒနာကို ပေါ်လာအောင် ထိုင်ပြီးသည့်နောက်မှ ၄င်းဝေဒနာကို စိုက်၍ရှုကြ၏။
ဝေဒနာ၏သဘာဝကို ထိုးထွင်း၍ သိမြင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဒုက္ခဝေဒနာကို ဒုက္ခဟုထင်လာအောင် ရှုခြင်းအားဖြင့် အကျိုးများ မများ စဉ်းစားထိုက်ပေသည်။
ဤဝေဒနာကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ရှုမှတ်လိုက်သောအခါ၌ ဝေဒနာပျောက်သွားသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဟုတ်ကား ဟုတ်ပါပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းဝေဒနာပျောက်သွားခြင်းသည် ပညာ၏အစွမ်းသတ္တိကြောင့်မဟုတ်။ သမာဓိ၏ အစွမ်းသတ္တိမျှသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဝေဒနာပျောက်သွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယပြည်၌ ဖကေးကုလားများ ကျစ်စန္ဒီနတ်ပူးသူများမှစ၍ လောက၌ အနည်းနည်းအဖုံဖုံ ရှိကြခြင်းကို ထောက်ခြင်းဖြင့် ဝေဒနာပျောက်သည်ဆိုရုံမျှနှင့် အထင်ကြီးထိုက်သည် မထင်ပေ။
ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရင်း ကိုက်ခဲနာကျင်လာသည်ဆိုကတည်းက စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝေဒနာ (psychological cause) ဖြစ်တန်ရာပေရာ၊ စိတ်၌တည်သော သမာဓိအစွမ်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဆိုခြင်းမှာ ထူးဆန်းလှသည် မဟုတ်ပေ။ မည်သို့ဆိုစေ ဤနည်းဖြင့် ဝေဒနာကို ရှုခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့သည့် ဝေဒနာနုပဿနာရှုနည်းနှင့် ကိုက်မကိုက် ညီမညီ ဆင်ခြင်စဉ်းစားသင့်လှသည်။ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်က မည်ကဲ့သို့ဟောပြစေကာမူ၊ ဗုဒ္ဓ ‘တား’ ထားခဲ့သော (ဓမ္မ)မျဉ်းကြောင်းနှင့် မလွတ်အောင် သတိပြုကြပါမှ မှန်းရွယ်ရာသို့ ရောက်နိုင်ကြပေလမ့်မည်။
ထို့ပြင်တ၀လည်း သတိနှင့်ယှဉ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းအားဖြင့် မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်းစသည်တို့၌ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ထားနိုင်သည့်အခါ၊ (ဉာဏ်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခဲ့လျှင်) ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓာတ် စသည်တို့၏ သဘာဝအချင်းအရာတို့သည် ဉာဏ်ထဲတွင်ထင်မြင်လာ၍ ဓမ္မာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ဖြစ်ပုံမှာကား သတိနှင့်ယှဉ်သော စိတ်ရှိစေဖို့လေ့ကျင့်၍ ရင့်ကျက်လာသောအခါတွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် အသံကြားလိုက်သောတစ်ခဏ၌ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ရှုနေရင်း အပြင်မှ သဒ္ဒဓာတ် (လေလှိုင်းဆိုချင်ဆို)နှင့် အတွင်းမှ သောတအကြည်ဓာတ်တို့ တိုက်ခိုက်မိခြင်းကြောင့် အသံကိုကြားသော၊ သို့မဟုတ် သိသော သောတ၀ိညာဉ်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကြားတတ်သော ငါကောင်ရှိသည်မဟုတ်။ အသံချုပ်ပျောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ၄င်းအသံကို သိတတ်သော ကြားစိတ်ကလေးသည်လည်း ချုပ်ပျောက်လေတော့သည် စသည်ဖြင့် (စာဆိုမဟုတ်) ဉာဏ်ထဲတွင် ရှင်း၍မြင်လာရသည်။
၄င်းဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာခြင်းသည် စိတ်ကူးကြံစည်ခြင်းဖြင့် ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်။ လက်ငင်းကြားလိုက်ရသော ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်အာရုံကို အစွဲပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာရသော ဉာဏ်ဖြစ်လေသည်။ စိတ်ကူးကြံစည်သော ဉာဏ်မျိုးမှာ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ဟု မဆိုနိုင်သောကြောင့် ၀ိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘဲ၊ စိန္တာမယဉာဏ်မျိုးသာ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အတွင်းနှင့်အပြင် တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ၀ိဉာဉ် (အသိစိတ်) ဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဟု ယခင်က ကြားသိဖူးသူဖြစ်လျှင်လည်း အသံကြားခိုက်တွင် စိတ်ထဲ နှလုံးထဲမှ ထပ်လောင်း၍ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သဘောကျပြီး ဖြစ်ပုံပျက်ပုံကိုလည်း ထင်းလင်းစွာ သိလိုက်ရသည်။
ဤသည်ကား ပထမတန်း ဉာဏ်ပညာကြီးသူတို့၏ အမြင်ဖြစ်သည်ဟု စာဆိုရှိပေရာ ကျွန်ုပ်မှာ စိတ္တနုပဿနာအတိုင်းသာလျှင် မြင်ရဖူးသူဖြစ်လေသည်။ ဤမျှလောက်ဆိုလျှင် ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လမ်းစဉ်အတိုင်း အားထုတ်လိုသူများအဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်လောက်ပြီဟု ယုံကြည်ပေသည်။
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ကျင့်စဉ်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စမ်းသပ်အားထုတ်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား အထူးသိစေလိုသော အချက်တစ်ခု တင်ပြလိုသေးသည်။ “သဒ္ဓါရက္ခတိ သီလံပိ” အစချီသော ပါဠိတော်အရမှာ သီလကို သဒ္ဓါက စောင့်၏။ သီလနှင့် သဒ္ဓါကို ပညာက စောင့်၏။ သီလ၊ သဒ္ဓါနှင့် ပညာတို့ကို သတိက စောင့်၏ ဟု ဗုဒ္ဓဟောတော်မူသည်။ (သင်က စောင့်သော အရာဟူ၍ တစ်ခုမျှ မပါချေ။)
စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ သတိနှင့်ယှဉ်သောစိတ်၊ သို့မဟုတ် သတိဦးစီးသောစိတ် ဖြစ်နေသည့် အခိုက်အတန့်အတွင်း၌ သီလလည်းလုံခြုံ၍ သဒ္ဓါနှင့်ပညာတို့လည်း တွဲဖက်လျက်ရှိသည်ဟု ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခြင်းကို သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ သတိနှင့်ယှဉ်သောစိတ် ဖြစ်နေသည့်အခိုက်အတန့်အတွင်း၌သာ လုံခြုံသည်။ သတိလွတ်သော တခဏ၌ သီလချိုးဖောက်နိုင်သည်ဟု စောဒကတက်သူရှိခဲ့လျှင် သတိ လက်မလွတ်အောင် လုပ်ရန်သာရှိသည်။
လိုရင်းအချုပ်မှာ သတိနှင့်ယှဉ်သောစိတ် ဟူသည်မှာ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟု နားလည်စေရန် တစ်စက္ကန့်မျှဖြစ်စေ၊ စမ်းသပ်ကြိုးစားကြည့်၍ သဘောပေါက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အချိန်ဆန့်ယူရန်သာ လိုတော့သည်ဟူလို။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:52 AM0comments Links to this post
ထို့နောက် တစ်ဆင့်ပြန်တက်သော် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်သူများကဲ့သို့ အချိန်သီးသန့်သတ်မှတ်၍ လေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်၊ အားလပ်သော အခိုက်အတန့်များ၌လည်း သတိနှင့်ယှဉ်သော စိတ်နှင့်နေမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ခဏတဖြုတ်လေ့ကျင့်ထိုက်ပေသည်။ အားလပ်သော အချိန်ဟူသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ထင်ကြသည်ထက် များလှပါသည်။ မည်မျှလောက် အလုပ်ရှုပ်သော လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေကာမူ၊ အလုပ်နှင့် မပတ်သက်ဘဲ၊ တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ထွေရာလေးပါး စဉ်းစားစိတ်ကူးသော အချိန်သည် မနည်းလှသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့ အလဟဿ အချိန်ကုန်စေမည့် အတောအတွင်းကလေး၌ သတိနှင့်ယှဉ်သော စိတ်မျိုးထားဖို့ တစ်နေ့လျှင် (ခဏတဖြုတ်ဖြစ်စေ) အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလေ့အကျင့်ပြုလုပ်ပါက အံ့သြလောက်အောင် တိုးတက်လာခြင်းကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
သတိကို အနှောက်အယှက်ပေးသော အရာ
သတိယှဉ်သောစိတ်ရှိဖို့ အလေ့အကျင့်ပြုလုပ်၍ သတိယှဉ်သော စိတ်ဖြစ်တိုင်း ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်အပေါ်သို့ ကျရောက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ စိတ်သည် သတိနှင့် ပူးလျက်ရှိသည့်အခါ အပြင်သို့မထွက်ဘဲ အတွင်းမှ စောင့်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ဖြစ်လာ၏။ ထိုအတောအတွင်း အပြင်မှ အသံတစ်ခု ကြားလိုက်ရသည်ဆိုအံ့။ ဘာသံပါလိမ့်ဟူ၍ စုံစမ်းရန် အပြင်သို့ရောက်မသွားဘဲ၊ အတွင်း၌သာဖြစ်၍ ချုပ်ပျောက်သွားသည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ အသံများ ဆက်ခါဆက်ခါဝင်လာခဲ့လျှင်၊ မိမိအတွင်း၌သာ ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်၍ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ချုပ်ပျောက်သွားသည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ သတိစောင့်သမျှ ကာလပတ်လုံး မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း စသည်တို့ကိုသာ အမှတ်ပြုမိ၍ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် အပေါ်၌သာ တည်လျက်ရှိ၏။ ဤအတောအတွင်း ကြံစည်စိတ်ကူးခြင်း ၀င်လာသည်ဆိုအံ့။ သတိလွတ်၍ သွားချေပြီ။ သတိနှင့်ကြားခြင်း၊ သတိနှင့်မြင်ခြင်း၊ သတိနှင့်စားခြင်းဟူ၍ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း သတိနှင့်ကြံစည်စိတ်ကူးသည်ဟူ၍ မဖြစ်နိုင်ချေ။ သတိကို အများဆုံး အနှောက်အယှက်ပေးသောအရာမှာ ကြံစည်စိတ်ကူးမှုပင်ဖြစ်သည်။
“ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ” လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းကို ဆက်လက်မဖော်ပြမီ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏ ဖြစ်တတ်သော သဘာဝကို ဖော်ပြရပေဦးမည်။ မည်သူမဆို ပုထုဇဉ်အဖြစ်တွင် ရုပ်ကိုသော်လည်း ‘ငါ’ ထင်သည်။ စိတ်ကိုသော်လည်း ‘ငါ’ ထင်သည်။ အချို့ မှာ စိတ်ကိုလည်း ငါမထင်၊ ရုပ်ကိုလည်း ငါမထင်။ သို့ သော်စိတ်နှင့်ရုပ်တို့ ကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ငါကောင်ကလေး (အတ္တမာန်၊ သို့မဟုတ် ဆိုးလ်) ရှိသေးသည်ဟု ထင်ကြသည်။ ဤသုံးမျိုးအနက် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် အထင်လွဲတတ်ကြသည်ချည်း ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှာ ရုပ်ကို ငါထင်သည့်အထဲမှ မဟုတ်။ သေလျှင်ပုပ်၍မြှုပ်လိုက်ရသော ကိုယ်ကာယကြီးဖြစ်၍ ငါမဟုတ်နိုင်၊ ငါတည်းဟူသော စိတ်ကလေးခိုအောင်းရာဖြစ်သော ‘အိမ်’ အနေဖြင့်သာ မှတ်ထင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဘ၀ကူးသောအခါ၌ စိတ်ဝိညာဉ်ကလေးသာ ကူးသွား၍ ရုပ်ကြီးကား နေရစ်သည်ဟု မှတ်ထင်ခဲ့ဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ မျက်စိလည်ခြင်းမှာ ရုပ်နှင့်ပတ်သက်၍မဟုတ်၊ စိတ်နှင့်ပတ်သက်သော အထင်မှားမှုသာဖြစ်သည်ဟု ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ကာ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ကင်းကွာစေလိုခဲ့လျှင် စိတ်အကြောင်းကိုဖိ၍ နှလုံးသွင်းပါမှ လျင်မြန်စွာ ပေါက်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံလမ်းစဉ်ကို မလုပ်မီကတည်းက သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးအနက်မှ စိတ္တနုပဿနာအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ လမ်းစဉ်အတိုင်း လေ့ကျင့်သော ယောဂီသည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးအနက် မိမိအစွဲသန်ရာအတိုင်း တစ်ပါးပါးနောက်သို့ အာရုံစူးစိုက်မိခြင်းကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ဥပမာ ရုပ်ပေါ်၌ အစွဲသန်သူဖြစ်ခဲ့လျှင် ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ထားရာတွင် ကိုယ်ကာယအပေါ်၌ အာရုံပြုမိပေလိမ့်မည်။ ထိုယောဂီမျိုးသည် ထိုင်ခြင်း၊ ထခြင်း၊ လျောင်းခြင်း၊ သွားခြင်းစသော ဣရိယာပုတ်များ၌သော်လည်းကောင်း၊ ကွေးခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း၊ စောင်းခြင်း၊ ငဲ့ခြင်းစသော ကိုယ်၏လှုပ်ရှားမှု၊ ပြောင်းလဲမှုများ၌သော်လည်းကောင်း စိတ်စိုက်မိပေလိမ့်မည်။ သို့ဆိုလျှင် ကာယနုပဿနာဖြစ်ပေတော့မည်။ သို့ပါသော်လည်း ယခင်က ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်း “ကွေးတယ်” “ဆန့်တယ်” ဟု နှလုံးသွင်းနေရန်မလို။ ကိုယ်အမူအရာ သက်သက်ကလေးမျှကို သတိပြု၍ စောင့်ကြည့်ရန်မျှသာ ဖြစ်လေသည်။ ကွေးမည်ပြုလျှင် ကွေးခြင်းတည်းဟူသော အနက်သဘော၏ အခေါ်အဝေါ်ကို မှန်ကန်အောင် သတိပြုရခြင်းသည် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်၍ ရုပ်တရားတို့၏ ယထာဘူတသဘာဝကို ထိုးထွင်းသိမြင်ရေးအတွက် အတားအဆီးသဖွယ် ဖြစ်တတ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံနည်းအတိုင်း လေ့ကျင့်သောယောဂီသည် ရုပ်အပေါ် ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကာယနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်နှင့် တစ်ထပ်တည်းကျသွားသည်ကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်မှာ စိတ်အပေါ်၌ အစွဲသန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံလမ်းစဉ်ကို လေ့ကျင့်၍ သတိယှဉ်သောစိတ် ဖြစ်စေနိုင်သော အချိန်များတွင် ထိုင်ခြင်း၊ ထခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း အစရှိသော ကိုယ်ကာယ၏ ပြောင်းလဲမှုများနောက်သို့ မလိုက်ဘဲ၊ လက်ငင်းသိစိတ်ကလေးတွေ ပြောင်းလဲပုံအခြင်းအရာကိုသာ ရှု၍ရှု၍နေတတ်သည်။ အိပ်ရာပေါ်တွင် ဘာသံမျှမကြားရသော ညဉ့်အချိန်များ၌ အခြားနည်း သတိပြုစရာ ရှာမရသော အခိုက်အတန့်များတွင် အသက်ရှူလျက်ရှိသော ကိုယ်ကြီးကို အာရုံပြုမိသော်လည်း များသောအားဖြင့်မူကား သိမှု တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုသာ ရှုကြည့်ခြင်း များလှသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ သတိလွတ်၍ တွေးတောကြံစည်မှုကလေးများ ၀င်လာသည်ဆိုအံ့။ တွေးတောမိသော အကြောင်းအရာသည် ပူပန်စရာဖြစ်၍၊ ပူပန်မိသည်ဆိုအံ့။ သတိရလာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်အပေါ်သို့ ရောက်လာ၍ ပူပန်ခဲ့သောစိတ်နှင့်တကွ ပူပန်စရာအကြောင်းအရာသည် အိပ်မက်သဖွယ် ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအခါ ပူပန်ခဲ့မိသော အကြောင်းအရာသည် ဒိဋ္ဌလက်ငင်း ရှိနေခြင်းမဟုတ်။ မှန်ထဲတွင် အရိပ်ထင်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ အိပ်မက်သကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ တခဏတာမျှ ပေါ်သာခိုက်တွင် ခံစားလိုက်ရသော ဒုက္ခဝေဒနာမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု သဘောပေါက်နိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့ သဘောပေါက်ခြင်းသည် စိတ်သဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍ ဉာဏ်အမြင် တိုးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ခဏတဖြုတ် သတိလစ်ခြင်းအတွက် ၀မ်းနည်းစရာမဟုတ်ချေ။ သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ ဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ခြင်းမှာလည်း အလကားသက်သက်ရသည်မဟုတ်၊ ယခင်က သတိနှင့်စောင့်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်တည့်အောင် ကြိုးစားခဲ့ခြင်း၏ အကျိုးဆက်မျှသာ ဖြစ်သည်ဟု နားလည်သင့်ပေသည်။ သတိပေးလိုသော အချက်တစ်ခုမှာ သတိမမြဲကောင်းလေသလောဟု စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်။ သတိလွတ်ပြီးနောက် ပြန်ထိန်းလိုက်သောာအခါ၌ အထက်ပါ ဉာဏ်အမြင်မျိုး ရရှိခြင်းသည်လည်း တန်ဖိုးရှိသည်ဟု မှတ်ယူသင့်သည်။
ဤကား စိတ်ကိုဦးစားပေး၍ ရှုသော ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံသမား၏ လမ်းစဉ်ပေတည်း။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:28 AM0comments Links to this post
ကျွန်ုပ်တွေ့သော စိတ်သဘာဝ (၆)
လွန်ခဲ့သော ဇွန်လအတွင်းက ရန်ကုန်သို့ရောက်ခဲ့သည်တွင် ကျွန်ုပ်၏ (ရှုမ၀) ဆောင်းပါးများနှင့် ပတ်သက်၍ စာဖြင့် ရေးသား မေးမြန်းကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ရသဖြင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေသစ်များ တိုးပွားခဲ့သည်။ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်များမှာ စာရေးဆရာ၊ ၀တ်လုံတော်ရ၊ ပင်စင်စားအရာရှိ စသည့် စဉ်းစားဉာဏ်သုံးသောအပိုင်း (intelligentsia) မှစ၍ ၄င်းတို့စိတ်ဝင်စားခြင်းအတွက် ၀မ်းသာမိသည်။ ၄င်းတို့အပြင် ရိပ်သာများ၌ တရားအားထုတ်လျက်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်ကြသဖြင့် အားတက်မိသည်။ တစ်ယောက်သော တရားသမား (ကမ္မဋ္ဌာန်းသမား)ကမူ ကျွန်ုပ်၏ ဆောင်းပါးများသည် တရားသမားလောက၌ ဗုံးဆန်ပေါက်ကွဲ (bomb shell) သကဲ့သို့ ရှိပါပေသည်ဟု ပြောပြသည်။ ဆိုလိုသော အဓိပ္ပါယ်မှာ သဘောတူလက်ခံနိုင်သော အချက်အလက်များလည်းရှိ၍ သဘောမတူနိုင်သော အချက်များလည်း ရှိစေကာမူ မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို အလန့်တကြားဖြစ်အောင် နှိုးပေးလိုက်သည်ဟု ပြောလိုရာရောက်၏။ သို့ဆိုလျှင် ဆောင်းပါးများရေးရသော ကျွန်ုပ်အဖို့ရာ၌ ရေးရကျိုးနပ်သည်ဟု ယူဆရပေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရသော ဓမ္မမိတ်ဆွေအချို့ က “ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ” တည်းဟူသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို နှစ်သက်သဘောကျ၍ စမ်းသပ်ရန်ကြိုးစားပါသော်လည်း အလွန်တရာ ခက်ခဲသော အလုပ် (herculean task) ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ သို့ပါ၍ မည်ကဲ့သို့ အစပြုရပါမည်ကို သိလိုပါကြောင်း ပြောကြသည်။ ကျွန်ုပ်မှာ တရားဟောတတ်သူ တစ်ယောက်လည်းမဟုတ်၊ နှုတ်ဖြင့်ပြောရခြင်းထက် စာဖြင့်ရေးရခြင်းကို အားကိုးတက်သူဖြစ်၍ တတ်နိုင်သမျှ နှုတ်ဖြင့်ပြောပြပြီးနောက် စာဖြင့် ရေးပြပါဦးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ ထိုမိတ်ဆွေများနှင့်တကွ ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများ၌ စိတ်ဝင်စားကြသော အခြားစာဖိတ်ပရိတ်သတ်များအတွက်ပါ ရည်ရွယ်လျက် ကျွန်ုပ်၏ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ဤနေရာမှ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
တစ်စုံတစ်ခုသော အရာဝတ္ထုကို မြင်သည့်အခါ မြင်ရုံနှင့် မပြီးဘဲ ဘာဝတ္ထု၊ ညာဝတ္ထုဖြစ်သည်၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်။ အသံတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရသည့်အခါ ကြားရုံနှင့် မရပ်ဘဲ ဘာသံ ညာသံ၊ ဘယ်သူ့အသံဖြစ်သည် စသည်များဖြင့် ရှည်လျားစွာ မလိုက်စေဖို့ အခက်အခဲ အကြီးအကျယ် တွေ့ရခြင်းကား ဟုတ်ပေလိမ့်မည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သတိပေါ့လျော့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ၀န်ခံကြမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ထိုကဲ့သို့ မပေါ့လျော့ရအောင်၊ သို့မဟုတ် သတိမလစ်စေရအောင် စောင့်ထိန်းဖို့ အခက်အခဲရှိပြန်လေသည်။ ၀ိပဿနာအလုပ်ဟူသည်မှာ သမထအလုပ်များကဲ့သို့ သမာဓိဦးစီးသော အလုပ်မဟုတ်၊ သတိဦးစီးသော အလုပ်ဖြစ်၍ သတိမွေးမြူဖို့ အထူးအရေးကြီးလှသည်။ သတိမွေးမြူပုံ မွေးမြူနည်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏လက်တွေ့တစ်ခုကို တင်ပြပါမည်။
နာမ်ခန္ဓာလေးပါး ရှိသည့်အနက် သိရုံကလေးသက်သက်မျှဖြစ်သော ၀ိဉာဏက္ခန္ဓာ (consciousness) နှင့် သင်္ခါရက္ခန္ဓာတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော သတိစေတသိက်တို့ကို ရှေးဦးစွာနားလည်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ တစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်၍ ဘာကောင် ညာကောင်ဟု သိခြင်းသည် ၀ိဉာဏက္ခန္ဓာ သက်သက်မဟုတ်တော့။ သညာက္ခန္ဓာ ပူးတွဲလျက် ရှိလေပြီ။ ဘာကောင် ညာကောင်ထိအောင် မသိစေဖို့ ထိန်းထားရန်မှာ ‘ငါ’ ၏ အလုပ်မဟုတ်၊ သတိစေတသိက်၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။ ‘ငါ’ သည် ဘာမျှတတ်နိုင်သည် မဟုတ်ချေ။ နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့ စုပေါင်းအလုပ်လုပ်နေကြသော ‘စိတ်’မျှသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးဦးစွာကြိုးစားရန်မှာ သိရုံကလေးသက်သက်မျှဖြစ်သော ၀ိဉာဏက္ခန္ဓာ(consciousness) ကို သတိတည်းဟူသော စေတသိက်နှင့် ပူးကပ်ထားရမည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရပြီးသည့်နောက်တွင်မှ ဘာကောင် ညာကောင် မသိစေရအောင် ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင် လွန်စွာခက်ခဲမည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုကဲ့သို့မမြင်မီ ပူးကပ်ထားမည် ဆိုပါမူကား မည်သည့်နည်းမဆို အရှည်ကြီးမလိုက်အောင် တတ်နိုင်ရာပေသည်။ ဤသို့ဆိုခြင်းဖြင့် သတိတရားကို တစ်စက္ကန့်မျှ လက်မလွတ်စေဘဲ၊ စိတ်နှင့်ယှဉ်တွဲ ပူးကပ်ထားရမည်ဟူလို။
ဤစာကို အမှတ်မဲ့ဖတ်သူများက “မည်သို့ ထူးသေးသနည်း၊ သတိထားရသော အလုပ်ချင်းအတူတူပင် မဟုတ်ပါလော” ဟု မေးချင်ကြပေလိမ့်မည်။ ထူးပါသည်။ အများကြီးထူးပါသည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို မြင်ပြီးမှ ဘာဘာညာညာမသိဖို့ ချုပ်ကိုင်ရခြင်းသည် မမြင်မီကတည်းက သတိစောင့်သောစိတ်၊ သို့မဟုတ် သတိနှင့် ယှဉ်သောစိတ်ရှိသဖြင့် အရှည်မလိုက်အောင် ထိန်းရခြင်းထက် အဆများစွာ ပို၍ခက်ခဲပါသည်။ ပထမ၌ သတိယှဉ်သောစိတ်ကို အစဉ်မပြတ် ဖြစ်စေနိုင်သည်မဟုတ်။ အခြားသောနည်းများဖြင့် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ကြသကဲ့သို့ ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် ထိုင်ရင်း အိပ်ရာပေါ်တွင် လဲလျောင်းရင်း၊ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်စသဖြင့် လေ့ကျင့်ရပါသည်။ သတိယှဉ်သော သိမှု (စိတ်) ဟူသည်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီးနောက် သဘောပေါက်၍ စမ်းသပ်ကြည့်သောအခါတွင် ယုတ်စွအဆုံးအားဖြင့် အသံတစ်ခု နှစ်ခုမျှကို အရှည်ကြီးမလိုက်ဘဲ၊ ကြားကာမတ္တဟူသော အနေမျိုးထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်တွင် တစ်မိနစ်လုံးလုံး၊ နှစ်မိနစ်လုံးလုံး စသည်ဖြင့် တိုးတက်ခြင်း ရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:01 AM0comments Links to this post
၀ိညာဏက္ခန္ဓာသည် မျက်လှည့်သမားနှင့် တူသည်ဟူသော ဗုဒ္ဓ၏ဥပမာမှာလည်း နားလည်ဖို့မလွယ်ကူချေ။ ကျွန်ုပ်သည် ၄င်းဥပမာကို တစ်သက်ပတ်လုံး ကြံဆတွေးတောလာခဲ့ရာ စိတ်သဘာဝကို လက်တွေ့ လေ့လာသောအခါမှ သဘောကျနိုင်ပေတော့သည်။ သညာ၏ လှည့်စားတတ်သောသဘာဝကို ဖော်ပြပြီးနောက် ၀ိညာဏက္ခန္ဓာကို မျက်လှည့်သမားနှင့် ထပ်ဆင့်ပြီး ဥပမာဆောင်ပြန်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် နားလည်ဖို့ ခဲယဉ်းခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်လှည့်သမားနှင့်တူပုံကား ဤသို့ တည်း။ ဥပမာ ဆင်ကောင်ကြီးကို မျက်စိထဲ၌ မြင်ယောင်စိတ်ကူးလိုက်သည့်အခါ အစွယ်ကြီးနှစ်ချောင်း၊ နှာမောင်းကြီးနှင့် ဆင်ကောင်ကြီးပေါ်လာသည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုဆင်သည် ဘာဆင်ဖြစ်သနည်း။ စိတ်ကဖန်ဆင်းသော ဆင်ဟုဆိုကြလျှင် စိတ်ကတခြား၊ ဆင်က တခြားလော။ စိတ်က တစ်နေရာမှာနေပြီး (ပန်းချီဆရာ အရုပ်ရေးခြင်းကဲ့သို့) ဖန်ဆင်းလိုက်ရာတွင် အခြားတစ်နေရာ၌ ဆင်ကောင်ကြီး ဖြစ်လာခြင်းပေလော။ သို့ဆိုလျှင် စိတ်ကတခြား၊ ဆင်ကတခြား ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ကားမဟုတ်ချေ။ ထိုသို့မဟုတ်နိုင်လျှင် အဘယ်သို့ဖြစ်သင့်သနည်း။ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆင်ဖြစ်စေကာမူ၊ စိတ်ကတခြား၊ ဆင်ကတခြား မဟုတ်သင့်သောကြောင့် ၄င်းဆင်သည် ‘စိတ်ဆင်’ ဖြစ်ရပေမည်။ ၄င်းနောက် ခွေးအကြောင်းစိတ်ကူးပြန်သောအခါ ‘စိတ်ခွေး’ ပေါ်လာပြန်၏။ သစ်ပင်ကို စိတ်ကူးပြန်ရာတွင် ‘စိတ်သစ်ပင်’ ပေါ်လာပြန်၏။ သတ္တ၀ါသည် တစ်နေ့အတွင်း စိတ်ကူးပေါင်း ရာထောင်မက ဖြစ်ပေါ်တတ်ပေရာ တစ်ထိုင်တည်းအတွင်း ဆင်ဖြစ်ချည်၊ ခွေးဖြစ်ချည်၊ သစ်ပင်ဖြစ်ချည် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲနိုင်သော သဘာဝသည် မျက်လှည့်ဆရာနှင့် တူသည်မဟုတ်ပါလော။
လူအများ အမှတ်မှားတတ်ကြသော သဘာဝတစ်ခုကို တင်ပြလိုသေး၏။ သူငယ်တစ်ယောက်သည် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြိုက်စွဲလန်းသည့်အခါ ထိုမိန်းကလေး၏ တစ်ကိုယ်ကောင်လုံးကို တပ်မက်စွဲလန်းလျက်ရှိသည်ဟု ထင်မှတ်တတ်ကြ၏။ စင်စစ်သော်ကား ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ချေ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းလုံး စွဲလမ်းခြင်းဖြစ်ပါမူကား ထိုမိန်းကလေး၏ အသေကောင် (အလောင်း) ကို ပေးလိုက်လျှင် ကျေနပ်ဖို့ သင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျေနပ်လိမ့်မည်ကား မဟုတ်ချေ။ သို့ဆိုလျင် အဘယ်ကို တပ်မက်စွဲလန်းခြင်း ဖြစ်ပါသနည်း။ စင်စစ်သော်ကား ထိုသူငယ်သည် မိန်းကလေးကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံ (ဣဋ္ဌာရုံ သို့မဟုတ် အာရုံ၏ အရသာ ခေါ် ဝေဒနာ) ကို တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းမျှသာ ဖြစ်လေသည်။
ရှင်းဦးအံ့။ ထိုသူငယ်သည် ၄င်းမိန်းကလေး၏ အဆင်းသဏ္ဍာန်ကို မြင်ရခြင်းကြောင့် ခံစားရသည့် ရူပါရုံ အရသာကိုလည်းကောင်း၊ အသံကိုကြားရခြင်းကြောင့် ခံစားရသည့် သဒ္ဒါရုံအရသာကိုလည်းကောင်း၊ အနံ့ရခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဂန္ဓာရုံအရသာကိုလည်းကောင်း (အင်္ဂုတ္ထိုရ်၌ ‘မြဲ’ ရသော ရသာရုံလည်းပါသည်) ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖောဋ္ဌဗ္ဗရုံကို လည်းကောင်း တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးကိုယ်တိုင် ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မိန်းကလေးကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အထက်ပါ အာရုံငါးပါးတို့နှင့် တွေ့နေရလျှင် သူငယ်သည် ကျေနပ်လိမ့်မည်သာဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ထိုအာရုံငါးပါးကို အခြားသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်အား အမှီပြု၍ ဖြစ်ပေါ်ရမည်ဆိုလျှင် ကျေနပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ သတ္တ၀ါတို့၏ အထင်အားဖြင့် လူကောင်ကြီးကို တပ်မက်စွဲလမ်းသည် ဆိုသော်လည်း စင်စစ်အားဖြင့် ထိုသူငယ်ထင်မှတ်သည့် လူကောင်သည် သူထင်သည့်အတိုင်း ဘယ်တုန်းကမှ ရှိသည်မဟုတ်ချေ။ အာရုံဟူသည်မှာ အမြဲတစေ တည်နေသည်မဟုတ်။ အခိုက်အတန့်အားလျော်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပေရာ တပ်မက်စွဲလန်းမှုဟူသမျှသည် ဘာမဟုတ်သော အခြင်းအရာကို အဟုတ်ကြီးထင်နေပြီး တပ်မက်စွဲလန်းနေခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မိန်းကလေး၏ အဆင်းကို တပ်မက်သော ထိုသူငယ်၏ စိတ်ထဲ၌ အဆင်းရူပါရုံသည် မည်မျှလောက် နက်နဲအောင် စူးဝင်နိုင်ပါသနည်း။ မျက်စိထဲ၌ တ၀ဲဝဲမြင်နေသည်ဆိုသော်လည်း လူကောင်ကြီးကိုယ်တိုင်မဟုတ်၊ မှန်ထဲတွင် အရိပ်ထင်ခြင်းကဲ့သို့ အပေါ်ယံကလေးမျှသာ ဖြစ်နိုင်၏။ သို့ရာတွင် ထိုသူငယ်၏ အထင်မှာမူ “အသည်းထဲမှာ စွဲနေပါသည်” ဟု ဆိုပေလိမ့်မည်။
မာန ထောင်လွှားစရာ မရှိ
သတ္တ၀ါအား လှည့်စားမှုတစ်ခုကို တင်ပြလိုသေး၏။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်သည် ၀န်ကြီးဖြစ်လာသည်ဆိုလျှင် အကယ်၍ လေးနှစ်ဖြစ်သည်ဆိုပါက သူသည် ထိုလေးနှစ်လုံးလုံး ၀န်ကြီးဖြစ်နေသည်ဟု ထင်မှတ်ပေလိမ့်မည်။ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးကြပါဦးစို့။ ၀န်ကြီးဖြစ်ခါစ၌ ထိုသူသည် “ငါကား ၀န်ကြီးတစ်ယောက်ပေတည်း” ဟု ခဏခဏ သတိရပေလိမ့်မည်။ သတိရသော အခိုက်အတန့်တိုင်း၌ ၀န်ကြီးဖြစ်ပေသည်ဟု ၀န်ခံသည်ထားပါဦး။ တစ်နေ့တစ်နေ့တွင် အကြိမ်သုံးလေးဆယ် သတိရ၍ “ငါဝန်ကြီးပေတည်း” ဟု ဆင်ခြင်မိသဖြင့် ခံစားရသော အရသာသည် ဘယ်လောက်များ ကြာလေမည်နည်း။ “ငါဝန်ကြီးပေတည်း” ဟု ဆင်ခြင်မိသော အခိုက်အတန့်အတွင်း၌သာလျှင် ၀န်ကြီးဖြစ်ရခြင်း၏ အရသာကို ခံစားနိုင်သည် မဟုတ်ပါလော။ အလုပ်လုပ်နေရသည့် အချိန်များအတွင်း၌ ၀န်ကြီးဖြစ်ရခြင်း၏ အရသာကို ခံစားရသည်မဟုတ်။ ၀န်ကြီး၏ ၀တ္တရားမျာကို ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် သုခချမ်းသာဟုတ်ပါ၏လော။ ငါဆောင်ရွက်ရခြင်းကြောင့် တိုင်းပြည်သာယာမည်ဆိုခြင်းမှာ စိတ်ကူး (အိပ်မက်) သက်သက်မျှသာ မဟုတ်ပါလော။ အလုပ်လုပ်ရသော အချိန်၊ အိပ်နေသောအချိန် (ရွှေကုတင်ကြီးပေါ် အိပ်နေသော်လည်း ဘာမျှမထူးချေ။) အမှတ်မဲ့ စကားပြောနေသော အချိန်၊ တွေးခေါ်စဉ်းစားနေသော အချိန် စသည်များကို နှုတ်လိုက်သည်ရှိသော် မည်မျှလောက် ကျန်လိမ့်မည်နည်း။ မိမိအကြောင်းကိုချည်း အများဆုံးနှလုံးသွင်းတတ်သည့် (egocentric) ၀န်ကြီးတစ်ယောက်ပင်လျှင် ထိုလေးနှစ် အတွင်း၌ ၀န်ကြီးဖြစ်ရသော အချိန်မှာ နာရီဖြင့်တွက်လိုက်ပါက တစ်နှစ်လည်းမရှိ၊ ခြောက်လလည်းမရှိ။ တစ်လပင် ပြည့်ကောင်းမှ ပြည့်ပေလိမ့်မည်။ သို့နှင့် ဘယ်လောက်များ မာန်မာန ထောင်လွှားသင့်ကြပါသနည်း။
ဤဆောင်းပါးအစတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်သည် ရွှေဘိုနယ်ဘက်သို့ လှည့်လည်ခဲ့ရာတွင် တရားအားထုတ်ပြီး၊ အားထုတ်ဆဲ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကို (ဤဂိုဏ်း ထိုဂိုဏ်းမှ ဤနည်း ထိုနည်းဖြင့်) အတော်များများ တွေ့ခဲ့ရ၏။ ထိုယောဂီများ၏ လိုလားချက်မှာ ဈာန်အတွက်မဟုတ်၊ မဂ်တရား ဖိုလ်တရားအတွက်ဖြစ်သော်လည်း သမာဓိ၏ အစွမ်းသတ္တိမျှလောက်ကို တကယ်ထင်မှတ်ရှာကြသည်မှာ ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း သမထအလုပ်သက်သက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးရာ သမာဓိ၏ ထူးဆန်းသော အခြင်းအရာမျိုးကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသည်။ တစ်ခါက (သမထ) ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရင်း ဗုဒ္ဓကို အာရုံပြုလိုက်မိရာ ကျောက်ဆင်းတုကိုယ်တော်ကြီး၏ ဆန်ကောခန့် ပမာဏရှိသော မျက်နှာတော်ကြီးသည် ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာနှင့် တစ်တောင်ကွာလောက်တွင် ဘွားခနဲ ပေါ်လာရုံမက ဆတ်ခ်ျလိုက်ဖြင့် တည့်တည့်ကြီးထိုးထားသည့်အလား ဖွေးဖွေးကြီး ရှိနေရကား အလန့်တကြားဖြစ်သွားမိသည်။ ထူးဆန်းခြင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်မှာ ဗုဒ္ဓကိုအာရုံပြုသောအခါတိုင်း ဆင်းတုတော်အဖြစ်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ပကတိလူသား၏ အနေအထား အသားအရေမျိုးဖြင့်သာလျှင် ပေါ်အောင် စိတ်ကူးပြီး ကြည်ညိုလေ့ရှိပါလျက် ဆင်းတုတော်ကြီး၏ မျက်နှာတော်ပေါ်လာခြင်းကို နားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော့သည်။ အခြားသော ကမ္မဋ္ဌာန်းသမားဆိုလျှင် ဘုရားဖူးရသည်ဆို၍ ၀မ်းသာကောင်း သာကြပေလိမ့်မည်။
ရွှေဘိုနယ်ရှိ ဂိုဏ်တစ်ဂိုဏ်းတွင် ယောဂီများ၏ ‘အမြင်အကြား’ ရသည်ဆိုခြင်းမှာ ယုတ္တိ တန် မတန် စဉ်းစားသင့်လှသည်။ ယောဂီတစ်ယောက်သည် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်၍ သမာဓိရလျက်ရှိစဉ် အလိုရှိရာသို့ မိမိ၏စိတ်ကိုလွှတ်နိုင်သည်ဆို၏။ မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိကိုလည်း ဖူးနိုင်သည်။ ရွှေတိဂုံကိုလည်း ဖူးနိုင်သည်။ နတ်ပြည်သို့လည်းကောင်း၊ ငရဲပြည်သို့လည်းကောင်း စိတ်ကိုလွှတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြလေသည်။ မဟာမြတ်မုနိနှင့် ရွှေတိဂုံတို့မှာ ယခင်ကရောက်ခဲ့ဖူး၍ စိတ်ဖြင့်အာရုံပြုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ (ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်သော ယောဂီ၏ အမြင်မှာ သာမန်စိတ်ကူးခြင်းထက် အဟုတ်တကယ်နှင့် တူခြင်း (realistic) ကိုကား ၀န်ခံရပေမည်။ ငရဲပြည်နှင့်နတ်ပြည်များသို့ စိတ်ကိုလွှတ်နိုင်သည်ဆိုခြင်းမှာလည်း အရုပ်ကားထဲမှ ငရဲသားများ၊ နတ်သား နတ်သမီးများ၏ အကူအညီ (စိတ်ကူး) ဖြင့် မြင်ရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသော ဒေသတစ်ခုသို့ စိတ်ကိုလွှတ်ကြည့်ပြီး စမ်းသပ်ဖို့ အကြံမရဘဲ တစ်ခါတည်းယုံကြည်ကြသည်မှာ သနားဖို့ ကောင်းလှသည်။ ဤခေတ်၌ မဂ်တရား ဖိုလ်တရားအတွက် အားထုတ်ရှာကြသည်တွင် သမထနှင့် ၀ိပဿနာတို့၏ ခြားနားပုံကို တိတိကျကျ မသိရှာကြဘဲ “အမေမှာ မှာသည့်အတိုင်း” ကြိုးစားကြခြင်းမှာ (ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်၍ ကုသိုလ်ရသည်ဟု ဆိုနိုင်စေကာမူ) ရည်ရွယ်ရာသို့ မရောက်တတ်သဖြင့် ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းလှပေသတည်း။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:35 AM0comments Links to this post
အထက်တွင် ဖော်ပြသည့် ရှုနည်းမျိုးအတိုင်း ရက်သတ္တတစ်ပတ်ခန့် ရှုမိသောအခါ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌ ထင်မြင်လာပုံမှာကား သတ္တ၀ါဟူသမျှသည် သမုဒ္ဒရာကြီးနှင့်တူသော သိမှု ၀ိညာဉ်ပြင်ကြီးထဲ၌ မျောလျက်ရှိကြသည်။ သမုဒ္ဒရာထဲ၌ မျောလျက်ရှိသော အရာဝတ္ထုများသည် ရေပြင်ကြီးအားဖြင့် ဆက်သွယ်လျက် ရှိဘိသကဲ့သို့ အသက်ရှိသော သတ္တ၀ါဟူသမျှတို့သည်လည်း သိမှုတည်းဟူသော ၀ိညာဉ်ဖြင့် ဆက်သွယ်လျက်ရှိကြသည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်၊ တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါးလည်း သိမှုတည်းဟူသော ၀ိညာဉ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းကြောင့် အချင်းချင်းသိအောင် လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိကြသည်။ (စင်စစ်မှာ အနောက်တိုင်း လောကဓာတ်ဆရာကြီးများ မှည့်ခေါ်ကြသည့် ‘အီသာဓာတ်’ ether နှင့် သာ၍တူသည်) တစ်ယောက်အပေါ်၌ တစ်ယောက် ဘာမျှ ဟန်ကြီးပန်ကြီး လုပ်စရာ အကြောင်းမရှိ။ အားလုံးတစ်ဆက်တည်း တစပ်တည်းဖြစ်သည် စသည်ဖြင့် ထင်မြင်လာတော့သည်။ ပထမ၌ ကျွန်ုပ်သည် ဤအမြင်ကို အတော်လေး အထင်ကြီးမိ၏။ သို့ရာတွင် (တရားသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရာ၌ အခြားကိစ္စများထက် ဉာဏ်ကောင်းလေ့ရှိသော ကျွန်ုပ်၏ပါရမီအတိုင်း) ငါ၏ အမြင်မှာ အနိစ္စသဘော၊ ဒုက္ခသဘော၊ အနတ္တသဘော မပါရှိသောကြောင့် ၀ိပဿနာအမြင် မဟုတ်နိုင်။ အရူပကမ္မဋ္ဌာန်းထဲမှ ၀ိညာဏံအနန္တံ ဟူသော အမြင်မျိုးဖြစ်နေတော့သည်ဆိုကာ ထိုရှုနည်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်တော့သည်။
စင်စစ်သော်ကား အပြတ်အပြတ်မြင်ခြင်း ရွရွ ရွရွဖြစ်ခြင်း၊ ပေါက်ပေါက်လှော်သကဲ့သို့ ထင်ရခြင်းစသော အခြင်းအရာများမှာ ၀ိပဿနာအမြင်ထက် သမထ (သမာဓိ)၏ အစွမ်းသတ္တိဖြစ်သည်ဟု နားလည်သင့်ကြသည်။ ဥပမာ ကာတွန်းရေးသမားတစ်ယောက်သည် မိမိတူအောင်ရေးမည့် လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်သောအခါ ထိုသူ၌ နှာခေါင်းချွန်ခြင်း သို့မဟုတ် နဖူးကျယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါးစပ်ပြဲခြင်း အစရှိသည့် ထူးခြားချက်တစ်ခုခုကို တပ်ကနဲမြင်တတ်ဘိသကဲ့သို့ တရားအားထုတ်၍ အတော်အတန် ရင့်ကျက်လာသော ယောဂီသည်လည်း တစ်စုံတစ်ခုကို စိုက်၍ရှုလိုက်သည့်အခါတိုင်း ထိုအခြင်းအရာ၏ အနိစ္စသဘောကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဒုက္ခသဘောကိုသော်လည်းကောင်း၊ အနတ္တသဘောကိုသော်လည်းကောင်း (လက္ခဏာရေးသုံးပါးအနက်) တစ်ပါးပါးသို့ တပ်ကနဲ မြင်လာသင့်သည်။ အပြတ်အပြတ်မြင်ခြင်း၊ ရွရွ ရွရွဖြစ်ခြင်း စသော အခြင်းအရာများမှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်နေသော အခိုက်အတန့်၌သာ ဖြစ်ပေါ်တတ်၍ မိမိပိုင်သော ဉာဏ်အမြင်ဟု ဆိုဖို့ခဲယဉ်းသည်။ အပြတ်အပြတ်မြင်ရခြင်းသည် ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြလျှင်ကား ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် ဟူသည်မှာ မျက်စိဖြင့်မြင်ရသော အခြင်းအရာမျိုး မဟုတ်ခြင်းကို စဉ်းစားထိုက်ကြသည်။
ခန္ဓာငါးပါးကို ဗုဒ္ဓက ဥပမာဆောင်ရာ၌ ရူပက္ခန္ဓာသည် ရေမြှုပ်နှင့်လည်းကောင်း၊ ဝေဒနက္ခန္ဓာသည် ရေပွက်နှင့်လည်းကောင်း၊ သညက္ခန္ဓာသည် တံလျှပ် (mirage) နှင့်လည်းကောင်း၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာသည် ငှက်ပျောတုံး လက်ပံတုံးနှင့်လည်းကောင်း၊ ၀ိညာဏက္ခန္ဓာသည် မျက်လှည့်သမားနှင့်လည်းကောင်း တူသည်ဟူ၍ ဟောတော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဗုဒ္ဓဟောခဲ့သော ဥပမာကို လူလားမြောက်ကတည်းက ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခဲ့ရာ ချောချောမောမော သဘောမကျနိုင်ဘဲ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် စိတ်သဘာဝအကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိရသောအခါမှ ကောင်းမွန်စွာပင် သဘောကျနိုင်ပါတော့သည်။ သဘောကျပုံကို တင်ပြပါအုံးမည်။
ရူပက္ခန္ဓာသည် ရေမြှုပ်နှင့်တူသည်ဟု ဆိုရာ၌ ခိုင်မြဲခြင်းမရှိသော အဖြစ်ကိုဆိုလိုသည်ဟု လူတိုင်းပင် မှန်းဆနိုင်ကြပေမည်။ (၀ိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် မမြင်သော်လည်း သာမညအားဖြင့် မှန်းဆနားလည်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။) ဝေဒနက္ခန္ဓာသည် ရေပွက်နှင့်တူသည် ဆိုရာ၌လည်း အသစ်အသစ်ဖြစ်နေသော ရေပွက်၏ နေပုံကိုမြင်ရခြင်းအားဖြင့် နားလည်နိုင်ကြပေမည်။ သညက္ခန္ဓာသည် တံလျှပ်နှင့်တူသည် ဆိုရာ၌ကား ‘တံလျှပ်’ ကို လူတိုင်းမြင်ဖူးကြမည် မဟုတ်သောကြောင့် နားလည်ဖို့ လွယ်ကူမည်မဟုတ်ချေ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှာ တံလျှပ် (mirage) ကို မမြင်ဖူးသော်လည်း စာအုပ်များတွင်ဖတ်ဖူးသဖြင့် တင်ပြရပေဦးမည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် (အထူးသဖြင့်) တောကြီးများအတွင်း၌ နေရောင်နှင့်တိမ်တိုက်တို့ ပနာမိသည့်အခါ တောင်ကြီးတစ်တောင်၏ အခြားဘက်၌ရှိသည့် ရှုခင်းတစ်ခုသည် ဤဘက်တွင် တည်ရှိသကဲ့သို့ အရိပ်ထင်စေလျက် အထင်အမြင်မှားစေသည်ဟု ဖတ်ရဖူးလေသည်။ ထို့ကြောင့် တံလျှပ်နှင့်ပမာ နှိုင်းခြင်းအားဖြင့် သညက္ခန္ဓာဟူသည်မှာ အဟုတ်တကယ် မရှိသော အခြင်းအရာကို အဟုတ်တကယ် ရှိဘိသည်အလား အထင်မှားသော သဘောတရားကို ဆိုလိုသည်ဟု နားလည်ကြရပေမည်။ တိုက်ရိုက်ဆိုရသော် ယမန်နေ့ကမြင်ခဲ့၍ စင်စစ်အားဖြင့် ပျောက်ပျက်သွားပြီဖြစ်သော စက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလျက် ထိုအခြင်းအရာကို ယနေ့မြင်ရပြန်သောအခါ ထိုနေ့ကမြင်ရဖူးခြင်းကို မှတ်မိသည်နှင့် ‘ငါမြင်ဖူးသည်’ ဟူသော အထင်မှားမှု ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ သညာ၏ လှည့်စားမှုကြောင့် သတ္တ၀ါ၏သန္တာန်၌ အတ္တဒိဋ္ဌိတည်းဟူသော အထင်မှားမှု ဖြစ်ပေါ်ရလေတော့သည်။
သင်္ခါရက္ခန္ဓာသည် ငှက်ပျောတုံးနှင့် တူသည်ဆိုသော ဗုဒ္ဓ၏ဥပမာမှာလည်း နားလည်ဖို့ မလွယ်ကူလှချေ။ ရူပက္ခန္ဓာတည်းဟူသော ကိုယ်ကာယကြီးသည် ငှက်ပျောတုံး လက်ပံတုံးကြီးနှင့် တူသည်ဟု ဥပမာဆောင်ပါလျှင်မူကား၊ လူတိုင်းသည် အလွယ်တကူနှင့် နားလည်နိုင်ကြပေမည်။ သေသောအခါ၌ ငှက်ပျောတုံး၊ လက်ပံတုံးကြီးနှင့်တူသော ရုပ်အလောင်းကြီးဟူ၍ လူတိုင်းပြောတတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓသည် သင်္ခါရက္ခန္ဓာတို့မှ ငှက်ပျောတုံးနှင့် ပမာနှိုင်းခြင်းမှာ လေးနက်သောအဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ သဘောပေါက်နားလည်ဖို့ အရေးကြီးလှသည်။ သင်္ခါရက္ခန္ဓာ၌ စေတသိက် ၅၀ ရှိရာ၊ ၄င်းတို့တွင် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတည်းဟူသော အကုသိုလ်စေတသိက်များနှင့် အဖိုးတန်သည်ဟု ထင်ကြရသော ပညိနြေ္ဒစေတသိက်တို့လည်း ပါဝင်လာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ အကောင်းရော အဆိုးပါ ပေါင်းစပ်လျက်ရှိသော သင်္ခါရက္ခန္ဓာသည် ငှက်ပျောတုံးနှင့် တူသည်ဟု ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခြင်းကား ငှက်ပျောတုံးသည် အထပ်ထပ် အလွှာလွှာရှိ၏။ တစ်ထပ်စီလွှာကြည့်သောအခါ အတွင်း၌ ‘အနှစ်’ ဘာမှ မရှိခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ရမည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကောင်းလှပါသည်ဆိုသော ကုသိုလ်စေတသိက်များနှင့် အဖိုးတန်လှပါသည်ဆိုသော ပညိနြေ္ဒစေတသိက်တို့သည်ပင်လျှင် အနှစ်သာရအဖြစ်ဖြင့် တွယ်ဖက်ထားစရာမဟုတ်။ ခန္ဓာငါးပါး အစုအဝေးတစ်ခုလုံးမှာ လွှင့်ပစ်စရာသာ ဖြစ်သည်ဟူလို။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:33 AM0comments Links to this post